Understanding True Love – Myanmar Bible .Net
Category: Understanding True Love
သင်ခန်းစာ (၄) လိင်၏တွန်းအားကို နားလည်ခြင်း
လူငယ်တစ်ဦးသည် လူကြီးဘဝသို့ရောက်လာသောအခါ သူ၏ကိုယ်ခန္ဓာအတွင်း၌ အားပြင်းသည့် တွန်းအား တစ်ခု ဖြစ်ပေါ်လာသည်ကို သိရှိခံစားရမည်ဖြစ်သည်။ ဤအားပြင်းသည့် တွန်းအားအသစ်မှာ လိင်၏တွန်းအားပင် ဖြစ်သည်။ လိင်နှင့်ပတ်သက်၍ အာသီသစိတ်ကို ဘုရားသခင်က ကျွန်ုပ်တို့အတွင်း၌ ထည့်သွင်းထားသည်။ ဤအရာက မညစ်ညူးသလို၊ မကောင်းသောအရာမဟုတ်ပါ။ လိင်၏လှုံ့ဆောင်မှုသည် ဘုရားသခင်၏ အကြံအစည်ဖြစ်သည်။ သူသည် ဆန်ကျင့်ဘက်လိင်ကို စိတ်ဝင်စားစေသော ဟိုမုန်းများကို ကျွန်ုပ်တို့အတွင်း၌ ထည့်သွင်းဖန်ဆင်းထားသည်။ ဘုရားသခင် ရည်ရွယ်ထားသည့် လိင်ဆက်ဆံမှုပုံစံမှာ လှပသည်။ ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းထားသော အရာအားလုံးသည် ကောင်းသည်။
လူတဦးက ကားတစ်စီးအား မောင်းနေသည်ဟု ဆိုပါစို့။ တစ်နေရာသို့ရောက်သောအခါ ကားမောင်းသူသည် ဘယ်ကွေ့ရင်ကွေ့၊ မကွေ့ရင်ညာဘက်သို့ ကွေ့ရန် ရွေးချယ်ရမည့်အနေအထားသို့ ရောက်လာသည်။ သူ၏ဘယ်ဘက်၌ ““တစ်လမ်းသွားဖြစ်၏။ မဝင်ရ””ဟူသော ဆိုင်းဘုတ်ကြီးကြီးကို မြင်ရသည်။ ကားမောင်းသူသည် ဆုံးဖြတ်ချက်ချကာ ဆိုင်းဘုတ်သတိပေးထားချက်ကို လျစ်လျူရှုပြီး ဘယ်ဘက်သို့ ကွေ့ဝင်ခဲ့သည်။ ယခုတွင် သူသည် လမ်းမှားအတိုင်း မောင်းနေပြီး ဥပဒေကိုလည်း ချိုးဖောက်၍ မိမိကိုယ်တိုင်နှင့် အခြားသူများအားလည်း အန္တရာယ်ဖြစ်စေမည်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့လိင်၏လှုံ့ဆော်မှုနှင့် ပတ်သက်လာလျှင်လည်း ထိုကဲ့သို့ပင် ရွေးချယ်ရမည့်အရာများရှိသည်။ လိင်၏ တွန်းအားသည် အပြစ်မရှိသော်လည်း ဤဆန္ဒကိုထိန်းချုပ်ရမည်ဟု ဘုရားသခင်က ပြောထားသည်။ ကျမ်းစာတွင် သူက ကျွန်ုပ်တို့အား မိမိကိုယ်ကိုသန့်ရှင်းအောင်ထားရန်နှင့် တနေ့တွင် မိမိ နှင့် လက်ထပ်မည့်သူအတွက် ခန္ဓာကို စောင့်ထိန်း ထားရန် ကြိမ်ဖန်များစွာ ပြောထားသည်။
ဘုရားသခင်က ကျွန်ုပ်တို့အား ပြောထားသည့်အရာများကို မနာခံခြင်းသည် လမ်းမှားအတိုင်း မောင်းနှင်နေသော ဒရိုင်ဘာကဲ့သို့ပင် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် အခြားသူတို့အတွက် အန္တရာယ်ရှိပြီး အပြစ်လည်းဖြစ်သည်။ လိင်၏လှုံ့ဆော်မှု တွန်းအားကို မှားယွင်းသောနည်းလမ်းဖြင့် ကျေနပ်စေပါက၊ အပြစ်ဖြစ်လာသည်။
ဘုရားသခင်သည် သတ္တဝါတိုင်းအား မိမိဘာသာမျိုးပွားနိုင်သည့် စွမ်းရည်ကိုပေးထားသည်။ တိရစ္ဆာန်များတွင် ပြင်းပြသည့် လိင်ဆန္ဒရှိပြီး ထိုအရာက သူတို့အား မိတ်လိုက်စေသည်။ သို့သော် တိရစ္ဆာန်များ၌ လိင်၏တွန်းအားမှာ ရာသီ အလိုက်သာဖြစ်သည်။ တိရစ္ဆာန်အမသည် သူဆန္ဒပြင်းပြနေသည့် အချိန်မှသာ၊ အထီးဖြစ်သူကို လက်ခံမည်ဖြစ်သည်။ ကျန်သည့်အချိန်များ၌ အမသည် လိင်ကိစ္စကို စိတ်မဝင်စားပါ။ ထင်ရှားစွာပင်၊ တိရစ္ဆာန်များ၌ လိင်၏တွန်းအားကို ဖြစ်ပေး စေခြင်းမှာ မျိုးပွားရန်အတွက် သာဖြစ်သည်ဟု ဘုရားသခင်က ရည်ရွယ်ထားသည်။
လူသားများတွင်မူ ထိုကဲ့သို့မဟုတ်ပါ။ ဘုရားသခင်က ကျွန်ုပ်တို့အား လိင်၏တွန်းအားကို ပေးထားခြင်းမှာ မျိုးပွားရန်အတွက်သာမဟုတ်ဘဲ။ ယောကျ်ားနှင့်ဇနီးမယားသည် တဦးအပေါ်တွင်ထားသောတဦး၏မေတ္တာကို အပြည့် အ၀ ဖော်ပြနိုင်ရန်အတွက်လည်းဖြစ်သည်။ အမှန်မှာ နည်းလမ်းမျိုးစုံဖြင့် ဘုရားသခင်က ကျွန်ုပ်တို့အား ဖန်ဆင်းနိုင်ပါသည်။ သူက တိရစ္ဆာန်တွေကို ဖန်ဆင်းသလိုမျိုး၊ ကျွန်ုပ်တို့ လိင်၏တွန်းအားကို ရာသီအလိုက်သာ ဖြစ်ပေါ်စေလျက်၊ ကျွန်ုပ်တို့ အား ဖန်ဆင်းခဲ့နိုင်ပါသည်။ သို့သော် ဤသို့ဖန်ဆင်းခြင်းသည် လိင်နှင့်ပတ်သက်၍ အကန့်အသတ်ရှိသော ပျော်ရွှင်မှု ကို သာ ကျွန်ုပ်တို့ရရှိမည် ဖြစ်သည်။ လိင်၏တွန်းအားပေးခြင်းကို အဆက်မပြတ်ခံနေရသောသူများအဖြစ်လည်း ကျွန်ုပ်တို့အား ဖန်ဆင်းခဲ့နိုင်ပါသည်။ သို့သော် ဤသို့ဖန်ဆင်းခြင်းက ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝကို မခံမရပ်နိုင် ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
အထက်ပါနည်းလမ်းများထက် များစွာကောင်းသော နည်းလမ်းအားဖြင့် ဘုရားသခင်က ကျွန်ုပ်တို့အား ဖန်ဆင်း ခဲ့ သည်။ လှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့် အသက်ဝင်လာသော လိင်ဆန္ဒအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အား ဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ယောကျ်ားနှင့်မိန်းမသည် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အာသီသစိတ်၏ ထိန်းချုပ် ထားခြင်းကို မခံရဘဲ အတူတကွ နေနိုင်ကြသည်။ သို့သော် သူတို့နှစ်ဦးသည် တော်လျော်သောအချိန်၌ သူတို့၏လိင်ဆန္ဒကို အပြန်အလှန်လှုံ့ဆော်ပေးနိုင်သည်။ အိမ်ထောင် ရေးဘဝအတွင်း၌၊ ယောကျ်ားနှင့် မိန်းမဖြစ်သူသည် အပြန်အလှန်လှုံ့ဆော်ခြင်းအားဖြင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော လိင်ဆန္ဒကို လိင်ဆက်ဆံခြင်းအား ဖြင့် တရားဝင် ကျေနပ်ဖြေသိမ့်စေနိုင်သည်။ ဘုရားသခင် ရည်ရွယ်ထားသော လိင်ဆက်ဆံမှု ပုံစံမှာ ဤပုံစံဖြစ်သည်။
သို့သော် ဤသို့သော ပြင်းပြသည့် ဆန္ဒများနှင့် စိတ်များသည် အိမ်ထောင်ရေးဘဝအပြင်ဘက်၌လည်း ဖြစ်ပေါ် လာနိုင်သည်။ သို့သော် ဤသို့ပြင်းပြသည့်ဆန္ဒများကို အိမ်ထောင်ရေးဘဝအပြင်ဘက်၌ တရားဝင်မဖြေနိုင်ပါ။ အိမ်ထောင် ရေး အပြင်ဘက်၌ ဆက်ဆံခြင်းသည် မတရားသောမေထုန်၌ မှီဝဲခြင်းဖြစ်ပြီး ဤအပြစ်က လူငယ်များ၌ အပျက်အစီးများစွာ ဖြစ်စေနိုင်သည့် အပြစ်များအနက် တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့် ကျမ်းစာက အိမ်ထောင်ရေးအပြင်ဘက်၌ ပြင်းပြသည့် လိင်ဆန္ဒများအား လှုံ့ဆော်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ များစွာ သတိပေးထားသည်။
လိင်၏လှုံ့ဆော်မှု တွန်းအားကို ရေနွေးငွေ့အိုးနှင့် နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်။ ရေနွေးငွေ့အိုး၏အောက်၌ မီးမွှေးသောအခါ၊ အိုးအတွင်းဘက်ရှိရေသည် ရေနွေးငွေ့အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသွားသည်။ ဤရေနွေးငွေ့သည် ကြီးမားသည့်ဖိအားအောက်၌ ရှိသော်လည်း သင့်တော်သည့်ထွက်ပေါက်တစ်ခုကို စီမံပေးထားသည်။ လျှပ်စစ်စွမ်းအားကို ထုတ်ပေးသည့် ရေလှည့် စကြာ (Turbine) ကို လှည့်ရန်အတွက် ဤအငွေ့အား အသုံးပြုသည်။ သို့သော် ရေနွေးငွေ့အိုး၏အောက်၌ မီးမွှေးပြီး အငွေ့ထွက်ဖို့ရန် အတွက် ထွက်ပေါက်မရှိပါက အိုးသည် ပေါက်ကွဲသွားလိမ့်မည်။
လိင်သည် ဘုရားသခင်ပေးထားသော ကောင်းမွန်သည့် လက်ဆောင်ဖြစ်သော်လည်း ဖြစ်တည်လာသော ကြီးမား သည့် သင်၏ခန္ဓာပိုင်းနှင့် စိတ်ပိုင်းဖိအားများကို လျော့နိုင်မည့် သင့်တော်သော ထွက်ပေါက် မရှိဘဲ၊ လိင်ပိုင်းအရ စိတ်ဆန္ဒ ပြင်းပြမှုဟူသော မီးကို မမွှေးပါနှင့်။ ကျမ်းစာက အသိအမှတ်ပြုသည့် လုံခြုံ၍ သင့်တော်သော ထွက်ပေါက်မှာ အိမ်ထောင် ရေးပင်ဖြစ်သည်။ အိမ်ထောင်ရေးဘဝ၏ အပြင်ဘက်၌ လိင်ဆန္ဒများကို လှုံ့ဆော်တွန်းအားပေးခြင်းသည် မှားသည်။
ယောကျ်ားများသည် အမြင်အားဖြင့်လည်း လှုံ့ဆော်ခြင်းခံရသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ စိတ်အာရုံအားလုံးသည် လိင်ပိုင်းအရ လှုံ့ဆော်မှု၌ တစိတ်တဒေသအဖြစ် ပါဝင်သော်လည်း၊ ယောကျ်ားများမှာ ထိတွေ့ခြင်းအားဖြင့်သာမက၊ သူတို့မြင်သောအရာများအားဖြင့်လည်း လှုံ့ဆော် ခြင်းကို ခံရသည်။ အင်္ကျီ ခပ်ကျပ်ကျပ် (သို့)လျှပ်ပေါ်သောအဝတ်အစားကို ဝတ်ထားသောမိန်းကလေးသည် ယောကျ်ားတစ်ဦးအား လိင်ပိုင်းအရ လှုံ့ဆော်နိုင်သည်။ အချို့မိန်းကလေးများက ဒါကိုသိကြသည်။ ယောကျ်ားများအား လှုံ့ဆော်ဖို့ရန်အတွက် သူတို့ ဘယ်လို ဝတ်ရမည်၊ ဘယ်လိုလျှောက်ရမည်၊ ဘယ်လိုထိုင်ရမည်၊ ဘယ်လိုလှုပ်ရှားရမည် စသည်တို့ကို သူတို့သိကြသည်။ ဤသို့လုပ်ခြင်းသည် မှားယွင်းသည်။ အကြောင်းမှာ ယောကျ်ားများအား အပြစ်ရှိသောအတွေးများကို တွေးစေနိုင်သော ကြောင့် ဖြစ်သည်။
မိန်းကလေးတဦးက ဤသို့ပြောခြင်းအားဖြင့် မိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်လိမ့်မည်။ ““အကယ်၍သူတို့မှာသာ ဆိုးညစ် တဲ့ စိတ်မရှိဘူးဆိုရင် ဒီလိုမျိုးတွေးမှာမဟုတ်ဘူး”” ကျမ်းစာက အခြားသူတဦးအား အပြစ်ဖြစ် စေခြင်းသည် အပြစ် ဖြစ်သည်ဟု ပြောထားသည်။ ရမ္မက်အားဖြစ်ပေါ်စေသော ရုပ်ပုံများ၊ အပြာမဂ္ဂဇင်းများ၊ အပြာရုပ်ရှင်အား ကြည့်ခြင်းသည် လိင်ပိုင်းရမ္မက်များနှင့် ပြင်းပြသော စိတ်ဆန်္ဒများကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။ ကျမ်းစာက ထိုအရာများကိုမလုပ်ရန် သတိ ပေးထား သည်။ နှုတ်ကပတ်တော်က ““….ကိုယ်ကာယ၏ တပ်မက်ခြင်းအလိုငှာ၊ မကြံစည်ကြနှင့်။ ”” ဟုဆိုသည်။ ရောမ ၁၃း၁၄
လိင်ကိစ္စသည် အရေးတကြီးပြုလုပ်ရမည့်ကိစ္စ မဟုတ်ပါ။
မည်သည့်အန္တရာယ်မှ မဖြစ်စေဘဲ၊ လိင်၏လှုံ့ဆော်မှုတွန်းအားကို ငြင်းပယ်နိုင်ကြောင်းကို လူငယ်များ သိသင့် သည်။ အစာမစားပါက ကြာရှည်စွာ အသက်မရှင်နိုင်သည့် ဆာလောင်မွတ်သိပ်မှုနှင့် ဤလိင်၏ဆာလောင်မှုသည် မတူညီပါ။ သင်သည် သင့်အပေါ်တွင် ဆိုးရွားသည့် သက်ရောက်မှုများမရှိဘဲ လိင်၏တွန်းအား၊ တနည်းအားဖြင့် ဆာလောင်မှုကို ငြင်းပယ်နိုင်သည်။ လိင်သည် အရေးကြီးသည်မှာ သံသယဖြစ်စရာမလိုသော်လည်း၊ အရေးတကြီး လုပ်ရမည့် ကိစ္စမဟုတ်ပါ။ လူများစွာတို့သည် လိင်ဆက်ဆံမှု မရှိဘဲ သူတို့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးကို ပျော်ရွှင်စွာပြည့်ဝစွာ ဖြတ်သန်းနိုင်ကြသည်။
တစ်ခါတစ်ရံ၊ ယောကျ်ားတဦးသည် ပွတ်သတ်ယုယခံရခြင်းနှင့် အခြားသောလှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုခုကြောင့် လိင်စိတ် နိုးထလာပြီး၊ သူ့ကောင်းမလေးအား ““ငါတို့ဒီအထိတောင်လုပ်ခဲ့ပြီးပြီးပဲ၊ မင်းငါကိုခွင့်ပြု ပေးရတော့မယ်”” ဟု ပြောလိမ့် မည်။ ဤသို့ပြောခြင်းက အကယ်၍ သူမသာ သူ၏ဆန္ဒကိုမလိုက်လျောပါက ဆိုးဝါးသောအရာတစ်ခုခုသည် သူ၌ ဖြစ်လာ တော့မည်ဟု ထင်ရသည်။ ဤသို့မဟုတ်ပါ။ သူသည် သူမနှင့် လိင်မဆက်ဆံပါက သူ့အပေါ်၌ မည်သည့်ဆိုးဝါးသည့် သက်ရောက်မှုများရှိမည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော် ဤအဆင့်အထိ ရောက်ခဲ့ခြင်းသည် ဉာဏ်ပညာရှိသော လုပ်ရပ်မဟုတ်ပါ။
ယောကျ်ားများအတွက် အထူးစကား ။ ။ လူငယ်ယောကျ်ားတဦးသည် လူကြီးအဖြစ်သို့ ကြီးထွားလာသောအခါ၊ သူ၌ပြင်းပြသည့်လိင်ဆန္ဒများရှိလာသည်။ သူ၏ကိုယ်ခန္ဓာသည် သုတ်ကောင်ထောင်ပေါင်းများစွာကို ထုတ်လျှက်ရှိသည်။ ဤသုတ်ပိုးများအား သူ၏ကိုယ်ခန္ဓာထဲတွင် သိုလှောင်ထားသည်။ အကယ်၍ သူသည် လက်မထပ်သေးဘဲ၊ စင်ကြယ်သော ဘဝကို နေထိုင်ပါက၊ သူ၏သိုလှောင်ရုံသည် ပြည့်လျှံသွား သောအချိန်သည် ရောက်လာလိမ့်မည်။ ဤသို့ပြည့်လျှံလာပါက၊ အိပ်ပျော်နေစဉ်အတွင်း ပိုလျှံနေသော အရာများကို ထုတ်ပစ်နိုင်ရန်အတွက် စီမံထားပေးသည်။ ဤအခြင်းအရာကို ညဘက် ထုတ်လွှတ်ခြင်း (သို့) စိုစွတ်သောအိပ်မက်ဟုလည်း ခေါ်သည်။ ဤကိစ္စသည် လူငယ်တစ်ဦး အတွက် သာမာန်သာဖြစ်ပြီး ရှက်စရာအကြောင်းမရှိပါ။
ရမ္မက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ သင်ခန်းစာ။ ။ ဒါဝိတ်မင်းကြီး၏ဘဝမှ ပေးသည့်ကြေးကွဲဝမ်း နည်းဖွယ် ကောင်းသော သင်ခန်းစာ
ရမ္မက်ကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သခင်ယေရှုတွင် ပြင်းထန်းသည့် စကားအချို့ရှိသည်။ ယေရှုက ““ငါပညတ်သည်ကား၊ ကိလေသာစိတ်နှင့် သူ့မယားကိုကြည့်ရှုသောသူသည် စိတ်နှလုံးထဲ၌ ထိုမိန်းမနှင့် ပြစ်မှားပြီ””ဟုဆိုသည်။ မဿဲ ၅း၂၈။ ဒါဝိတ်သည် ဘုရားသခင်၏ကြီးမြတ်သူတစ်ဦးဖြစ်သည်။ သူသည် ဆာလံသီချင်းများစွာကို ရေးစပ်ခဲ့သည်။ အစ္စရေး၏ ဘုရင်များအနက် အကြီးမြတ်ဆုံး ဘုရင်တပါး ဖြစ်သည်။ သို့သော် ဒါဝိတ်သည် ရမ္မက်ကို သူ့အားနင်းချေခွင့်ပြုခဲ့ပြီး အဆိုးဆုံးအပြစ်များထဲမှ နှစ်ခုကို ကျူးလွန်ခဲ့သည်။ ထိုနှစ်ခုမှာ သူ့မယားနှင့်ဖောက်ပြားခြင်းနှင့် လူသတ်မှုပင်ဖြစ်သည်။
ကျမ်းစာက မည်သို့ဤကိစ္စဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်ကို ပြောပြထားသည်။ တစ်ညတွင် ဒါဝိတ်သည် နန်းတော်၏ အမိုး၌ လမ်းလျှောက်ထွက်နေစဉ်အတွင်း၊ လှပသောမိန်းမတစ်ဦး ရေချိုးနေတာကို တွေ့ခဲ့သည်။ တခါတရံ သင်သည် ပထမဆုံး အကြည့်ကို မရှောင်လွဲနိုင်သော်လည်း၊ ဒါဝိတ်သည် ထပ်ခါတလဲလဲ ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ပြင်းပြသည့် ရမ္မက်စိတ်ကို သူ့နှလုံး အတွင်း၌ ဆူပွတ်စေခဲ့သည်။ သူသည် ဗာသရှေဘ ကို ခေါ်ခိုင်းလိုက်ပြီး သူမနှင့်ဖောက်ပြားခဲ့သည်။
အတန်ကြာပြီးနောက် ဗာသရှေဘက သူမတွင် ကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းကို ဒါဝိတ်အား အကြောင်းကြား ခဲ့ သည်။ ဗာသရှေဘ၏ခင်ပွန်းမှာ အဝေးအရပ်၌ စစ်တိုက်ထွက်နေသောကြောင့် သူ၏ ဖောက်ပြားမှုအပြစ်သည် မကြာမီ အချိန်တွင် လူသိရှင်ကြားဖြစ်လာတော့မည်ကို ဒါဝိတ်နားလည်ခဲ့သည်။ သူ၏အပြစ်ကို ဖုံးကာရန်နှင့် ဗာသရှေဘနှင့် လက်ထပ်နိုင်ရန်အတွက် ဒါဝိတ်သည် ဗာသရှေဘ၏ ခင်ပွန်းကို သေစေရန် စီမံခဲ့သည်။ ထို့နောက်သူသည် ဗာသရှေဘနှင့် လက်ထပ်ရန် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သည်။ ဒါဝိတ်သည် သူ၏ဖောက်ပြားမှုနှင့် လူသတ်မှုအပြစ်များကို အောင်မြင်စွာ ဖုံးကာ နိုင်ခဲ့သည်ဟု ထင်ရသော်လည်း ကျမ်းစာက သူသည် ဘုရားသခင်အား စိတ်ပျက်စေခဲ့သည်ဟု ဆိုထားသည်။
ဘုရားသခင်သည် ပရောဖတ်နာသန်ကို ဒါဝိတ်အားရင်ဆိုင်ရန် စေလွှတ်ခဲ့သည်။ ဒါဝိတ်သည် သူ၏အပြစ်များ အတွက် အမှန်တကယ် နောင်တရခဲ့ပြီး ဘုရားသခင်ထံ ဝန်ချတောင်းပန်ခဲ့သည်။ ဒါဝိတ်က ““အိုဘုရားသခင်၊ ကျေးဇူးပြု ချင်သော စေတနာစိတ်တော်ရှိသည်အတိုင်း၊ အကျွန်ုပ်ကို သနားတော်မူပါ။ စုံမက်တော်မူခြင်း ဂရုဏာ များပြားသည်နှင့် အညီ အကျွန်ုပ်ကျူးလွန်ခြင်းအပြစ်ကို ဖြေတော်မူပါ။ ဒုစရိုက် အညစ်အကြေးကို အကုန်အစင်ဆေးကြော၍၊ အကျွန်ုပ်ကို သန့်ရှင်းစေတော်မူပါ””ဟုဆိုခဲ့သည်။
ဒါဝိတ်သည် သူ၏အပြစ်များအတွက် အမှန်ပင်စိတ်နှလုံးကျိုးပဲ့ကြေမွခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်က ဒါဝိတ်ကို ခွင့်လွှတ်ပြီး သူနှင့်ပြန်လည် မိတ်သဟာယဖွဲ့စေခဲ့သည်။ သို့သော် ဒါဝိတ်သည် သူ့အပြစ်၏ အကျိုးဆက်များကို ရိတ်သိမ်း ခဲ့ရသည်။ ကျမ်းစာက ““အလွဲမယူကြနှင့်၊ ဘုရားသခင်သည် မထီမဲ့မြင် ပြုခြင်းကိုခံတော်မမူ။ လူသည် မျိုးစေ့ကြဲသည် အတိုင်း အသီးအနှံကိုရိတ်ရလိမ့်မည်”” ဟုဆိုသည်။ဂလာ ၆း၇
ဒါဝိတ်၏အပြစ်များကြောင့် ““ဓားလက်နက်””သည် သူ၏အိမ်မှ မထွက်ခွာရဟူ၍ ဘုရားသခင်က ပရောဖက် နာသန်မှတဆင့် ဒါဝိတ်အားကြားပြောခဲ့သည်။ ဤအချက်က ဆိုလိုသည်မှာ ဒါဝိတ်သည် သူ၏မိသားစုအတွင်း၌ ဝမ်းနည်း စရာများနှင့် ကြေကွဲစရာများစွာကို ခံစားရမည်ဟု ဆိုလိုသည်။ ဘုရားသခင်ပြောထားသည့်အတိုင်း ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဗာသရှေဘနှင့်ရသောသားသည် သေဆုံးခဲ့သည်။ ဒါဝိတ်၏ သားတဦးဖြစ်သူ အာမနုန်သည် ညီမဝမ်းကွဲ တာမာကို မုဒိမ်း ကျင့်ခဲ့သည်။ အခြားသားတဦးက အာမနုန်ကို သတ်ခဲ့သည်။ ဒါဝိတ်၏အခြားသားတဦးဖြစ်သူ အဗရှလုံသည် ဖခင်ကို ဦးဆောင်ပုန်ကန်ခဲ့ပြီး တိုက်ပွဲ၌ ကျဆုံးခဲ့သည်။ ဤအရာတို့မှာ ဒါဝိတ်အပြစ်များ၏ ဆိုးရွာသော အကျိုးဆက်များထဲမှ အချို့ ဖြစ်သည်။
ဒါဝိတ်၏ကြီးမားသောအပြစ်များကို လေ့လာခြင်းအားဖြင့် အရေးကြီးသင်ခန်းစာ ၂-ခုကိုရရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များသည် ခွင့်လွှတ်ခြင်းခံရမည်ဖြစ်သော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်မှု၏အကျိုးဆက်ကိုမူ ရိတ်သိမ်း ရမည်။
အချို့သောအပြစ်များသည် ဆိုးဝါးသည့် တစ်ဘဝစာအကျိုးဆက်များရှိသည်။
““ဒါမျိုး ကျွန်တော့်မှာမဖြစ်ပါဘူး”” ဟုသင်ကပြောလိမ့်မည်။ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ဒါဝိတ်သည် ဝိညာဉ် ရေးအရ ရင့်ကျက်သန်မာသူဖြစ်သော်လည်း၊ သူ၏လိင်ဆန္ဒ လှုံ့ဆော်ခြင်းခံရခြင်းကို အခွင့်ပေးခဲ့ပြီး ရမ္မက်အား ကျော်လွှား နိုင် လောက်အောင် မရင့်ကျက်ခဲ့ပါ။ သင်သည်လည်း သင်၏လိင်ဆန္ဒလှုံ့ဆော်ခံရ ခြင်းကို အခွင့်ပေးပါက၊ သင်၏ရမ္မက်စိတ်ကို နင်းချေနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ လိင်ဆန္ဒကို အဆက်မပြတ် လှုံ့ဆော်ပေးနေပါက၊ အပြစ်လုပ်မိမည်မှာ သေချာသည်။ ကျမ်းစာက ““မိမိဇာတိပကတိ၌ မျိုးစေ့ကြဲသောသူသည်၊ ဇာတိပကတိအားဖြင့် ပုပ်ပျက်ခြင်းအသီးအနှံကို ရိတ်ရ လိမ့်မည်။””ဟုဆိုသည်။ ဂလာ ၆း၈
ဤကောင်းမွန်သော လိင်ဆိုသည့် လက်ဆောင်ကို ကာကွယ်ရန်အတွက်၊ ဘုရားသခင်က စည်းမျဉ်းအချို့နှင့် ပညတ်အချို့ကို ကျွန်ုပ်တို့အား ပေးထားသည်။ ၎င်းတို့ထဲမှ အချို့ကို ကြည့်ကြပါစို့။
မတရားသောမထုန်၌ မှီဝဲခြင်းဆိုသည်မှာ လက်မထပ်ရသေးသော ယောကျ်ားနှင့်မိန်းမတို့ ဆက်ဆံ ကြခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ ဤအပြစ်သည် အလွန်ဆိုးသည့် အကျိုးဆက်များကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ကျမ်းစာက ““ ….ကိုယ်ခန္ဓာသည် မတရားသောမေထုန်အဖို့ ဖြစ်သည်မဟုတ်။ ….မတရားသောမေထုန်ကိုကြဉ်ရှောင် လော့။ …မတရားသောမေထုန်ကို ပြုသောသူသည် မိမိကိုယ်ကိုပင် ပြစ်မှား၏””ဟုဆိုသည်။
(စည်းမျဉ်း ၂) အခြားသူများအား အပြစ်လုပ်မိစေရန် မသွေးဆောင်ပါနှင့်။
ကျမ်းစာက ယောကျ်ားတဦးသည် သူ၏စိတ်နှလုံးအတွင်း၌ မိန်းမတဦးကို တပ်မက်ခြင်းသည် အပြစ်ဖြစ်သည်ဟု ပြောသည်။ ဤကဲ့သို့ပင် မိန်းမတဦးဘက်မှလည်း ယောကျ်ားများ ရမ္မက်စိတ်နိုးထလာအောင် တမင်သက်သက် ဝတ်ဆင် ပြုမူခြင်းသည် အပြစ်ဖြစ်သည်။ အချို့သောမိန်းကလေးများသည် ယေကျ်ားလေးများ သူတို့ကို တပ်မက်လာအောင် ဝတ်စား ဆင်ယင်၍ ပြုမူလုပ်ဆောင်ကြသည်။ သူတို့က ““အဲဒါ ယောက်ျားတွေ့ရဲ့ပြဿနာ” ပဲ ဟူ၍ ပြောနိုင်သော်လည်း၊ တနေ့တွင်မူ အခြားသူများအား အပြစ်ဖြစ် စေခြင်းအတွက် ဘုရားသခင်ရှေ့တွင် ဖြေရှင်းချက်ပေးရမည်ဖြစ်သည်။
(စည်းမျဉ်း ၃) သင့်အား အပြစ်လုပ်မိစေရန် အခြားသူများ၏သွေးဆောင်ခြင်းကို ငြင်းပယ်ပါ။
ယေရှုက ““ဒုစရိုက်ကိုပြုသမျှသောသူတို့သည် ဒုစရိုက်၏ကျွန်ဖြစ်ကြ၏။””ဟုဆိုသည်။ အချို့သော သူတို့သည် သူတို့၏လိင်ပိုင်းအရ ကိုယ်ကျင့်တရားမကောင်းမှု၌ ဝမ်းမြောက်နေကြပြီး၊ အခြားသူတို့အားလည်းသူတို့၏ အဆင့်သို့ နိမ့်ဆင်း စေလိုကြသည်။ သူတို့က လုပ်ချင်တာမှန်သမျှလုပ်ရသည်မှာ ““လွတ်လပ်””ကြောင်း ပြောကြသော်လည်း၊ အမှန်မှာ သူတို့သည် တချိန်လုံး၌ သူတို့၏အပြစ်များ၏ ချည်နှောင်ထားခြင်းခံထားရသည်။ ကျမ်းစာက ““လွှတ်ခြင်း အခွင့် ရှိသည်ဟု ဝန်ခံလျက်ပင်၊ ကိုယ်တိုင်ပုပ်ပျက် ခြင်း၏ ကျွန်ဖြစ်ကြ၏။”” ဟုဆိုသည်။ ၂ပေ ၂း၁၉
(စည်းမျဉ်း ၄) ပုံမှန်မဟုတ်သော လိင်ဆန္ဒများကိုရှောင်ကြဉ်ပါ။
ပုံမှန်ယောက်ျား-မိန်းမ လိင်ဆက်ဆံမှုမှ သွေဖယ်ခြင်းမှန်သမျှသည် ဘုရားသခင်ကျွနု်ပ်တို့အတွင်း ၌ထည့်သွင်းထား သော လိင်သဘာဝကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ပြီး မှားယွင်းစွာအသုံးပြုခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်က ““မိန်းမနှင့် ပေါင်းဘော် သကဲ့သို့၊ ယောကျ်ားချင်းပေါင်းဘော်လျှင် ထိုသူနှစ်ယောက်တို့သည် ရွံ့ရှာ ဖွယ်သောအမှု(အပြစ်)တို့ကို ပြုသောကြောင့်၊ …””ဟုဆိုသည်။ ဝတ်ပြု ၂၀း၁၃ ကျမ်းစာက ဘုရားသခင်သည် သောဒုံမြို့နှင့်ဂေါမောရမြို့ကို ဖျက်ဆီးခဲ့ခြင်းမှာ သူတို့သည် လိင်တူဆက်ဆံမှုကို ကျယ်ကျယ် ပြန့်ပြန့် လုပ်နေသောကြောင့်ဖြစ်သည်ဟု ပြောထားသည်။ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်က ဤသို့ ဖျက်ဆီးခဲ့ခြင်းမှာ ဘုရားသခင်၏အလိုတော်နှင့်မညီသော အရာများကို သတိပေးခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
ကျီစယ်ခြင်းဆိုသည်မှာ အခြားသူတဦး၏ လိင်ဆန္ဒကို တမင်တကာလှုံ့ဆော်ပေးခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ အခြား သူတဦး၏ ရမ္မက်မီးကို မမွှေးပေးပါနှင့်။ ဘုရားသခင်၏အမြင်၌ ဤသို့လုပ်ခြင်းသည် အပြစ် ဖြစ်သည်။
(စည်းမျဉ်း ၆) သင့်ကိုသင်သန့်ရှင်းစေပါ။
ဤစည်းမျဉ်းက ဆိုလိုသည်မှာ လိင်ပိုင်းအရ ဖောက်ပြားမှုအားလုံးကို ရှောင်ကြဉ်ရမည်ဟု ဆိုလို ခြင်းဖြစ်သည်။ သင်၏အနာဂတ်အိမ်ထောင်ဖက်အား သင်ပေးနိုင်သော အကောင်းဆုံးလက်ဆောင်မှာ သင်၏သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်း ပင် ဖြစ်သည်။ ဤအချက်သည် မိန်းကလေးများနှင့်သာမက ယောကျ်ားများ နှင့်လည်း သက်ဆိုင်သည်။
(စည်းမျဉ်း ၇) တနေ့တွင်အခြားသူတဦးက တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်မည့်အရာကို ယူလည်းမယူပါနှင့်။ ပေးလည်းမပေးပါနှင့်
မတရားသောမေထုန်၌ မှီဝဲခြင်းသည် အလွန်မှားယွင်သည်။ မိမိ၏အပျိုစင် ဘဝကို စွန့်လွှတ်သော မိန်းကလေး သည် သူမ၏အနာဂတ်ခင်ပွန်းပိုင်ဆိုင်သောအရာကို အခြားသူတဦးအား ပေးလိုက်ခြင်း ပင်ဖြစ်သည်။ သူမ၏လိင်ဆက်ဆံ ဖက် မှာလည်း သူမကဲ့သို့ပင် အပြစ်ရှိသည်။
(စည်းမျဉ်း ၈) ရမ္မက်စိတ်ကို နိုးထလာစေသောအရာများကို ရှောင်ပါ။
အိမ်ထောင်ရေးဘဝ၏ အပြင်ဘက်၌ လိင်ဆန္ဒကိုနှိုးဆော်ခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကျမ်းစာက သတိ ပေးထားသည်။ ကျမ်းစာက ““လူပျိုတို့၏ တပ်မက်ခြင်းကိလေသာစိတ်ကို ကြဉ်ရှောင်လော့””ဟုဆိုသည်။ ၂တိ ၂း၂၂ တပ်မက်ခြင်း စိတ် ကို ကြဉ်ရှောင်လော့ဟု ဆိုရာ၌ ရမ္မက်စိတ်ကို ဖြစ်ပေါ်စေသော အရာအားလုံးကို လုံးဝငြင်းပယ်ရမည်ဟု ဆိုလိုသည်။ ရမ္မက်စိတ်သည် အန္တရာယ်ကင်းမဲ့သည်ဟု ထင်ရသော်လည်း သေစေနိုင်သောအရာပင်ဖြစ်သည်။
ယောကျ်ားတဦးသည် ယနေ့ညတွင် ဒိတ်လုပ်ထားသည်ဆိုပါစို့။ သူသည် အိမ်မှမထွက်မီ ရမ္မက် စိတ်ကို နိုးထ စေသော မဂ္ဂဇင်းတစ်အုပ်ကိုဖတ်သည်။ သူ၏လိင်ဆန္ဒကို လှုံ့ဆော်သောရုပ်ပုံများအားကြည့်ပြီး စားသားများနှင့် သံစဉ်များ က ရမ္မက်စိတ်ကို နိုးကြွစေသောသီချင်းအား နားထောင်သည်။ ထို့နောက် သူသည် သူ့ကောင်မလေးကို သွားကြိုပြီး ရုပ်ရှင်ရုံသို့သွားခဲ့သည်။ သူတို့သွားကြည့်သည့်ရုပ်ရှင်မှာလည်း ရမ္မက်နှင့်ပြည့်နှက်နေပြီး လိင်ဆန္ဒကို ပြင်းပြစေသော ရုပ်ရှင်မျိုးဖြစ်သည်။ သူသည် တပ်မက်ခြင်းကိလေသာစိတ်ကို ရှောင်ကြဉ်နေသလော။ မရှောင်ကြည်သည့်အပြင် ပို၍ ပြင်းပြလာအောင်လုပ်နေခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ ရုပ်ရှင်ပြီးနောက် သူတို့သည် ချိန်ချက်ထားသောနေရာ၌ကားကို ပါကင် ထိုးလိုက်သည်။ နှစ်ဦး စလုံးမှာ သူတို့မြင်သောအရာ၊ ကြားသောအရာများအားဖြင့် လှုံ့ဆော်ခြင်းကို ခံထားရပြီး ဖြစ်သောကြောင့် တဦးကိုတဦး ပွတ်သတ်ပြီးနောက် မကြာမီ လိင်ဆက်ဆံကြတော့မည်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ဖြစ်လာသည်ကို အံ့သြစရာလိုပါသလား။ မလိုပါ။ အမှန်မှာ အစပိုင်းတွင် သူတို့လုပ်ခဲ့သောအရာများ၏ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိသော အကျိုးဆက် ပင်ဖြစ်သည်။ ကျမ်းစာက ““လူသည် အဝတ်မပါဘဲ၊ လောင်သောမီးကို ပိုက်နိုင်သေလာ။ ခြေမလောင်ဘဲ မီးခဲပေါ်မှာ နင်းနိုင်သလော”” ဟုဆိုသည်။ သု ၆း၂၇ သင်သည် မီးလောင်နေသောမီးခဲပေါ် ၌ သင့်ခြေထောက်မီးမလောင်အောင် မလျောက်နိုင်သကဲ့သို့၊ လိင်ပိုင်းအရလှုံ့ဆော်မှုကို စဉ်ဆက်မပြတ် ရှာဖွေနေပါက အပြစ်လုပ်မိမည်သာဖြစ်သည်။
လိင်သည် ဘုရားသခင်ပေးထားသည့် ကောင်းမွန်သောလက်ဆောင်ဖြစ်သည်။
လိင်သည် နှစ်လိုဖွယ်ဘုရားသခင်က ပေးထားသောလက်ဆောင်ဖြစ်သည်။ ဤအရာက အိမ်ထောင် ရေးတစ်ခုကို ပိုမိုသန်မာစေပြီး၊ ဘဝအသက်တာကို နိုးကြားထကြွစေသည်။ ဤအတွေ့အကြုံသည် ပျော်ရွှင်ကြည်နူးဖွယ် ကောင်းလှ သော အတွေ့အကြုံဖြစ်သောကြောင့်၊ ယောကျ်ားနှင့်ဇနီးမယားကို တလုံး တဝတည်းပင်ဖြစ်စေသည်။ ကျမ်းစာက ““….ထိုသူနှစ်ယောက်တို့သည် တသားတကိုယ်တည်းဖြစ်ရလိမ့်မည်။””ဟုဆိုသည်။ ဧဖက် ၅း၃၁ တလုံးတဝတည်း ဖြစ်သည် ဆိုရာ၌ ခန္ဓာပိုင်းအရ တလုံးတဝတည်း ဖြစ်ခြင်းသာမဟုတ်ဘဲ လူနှစ်ဦး၏ ခန္ဓာဝိညာဉ်အားလုံးသည် ပေါင်းစပ် သွားခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ လိင်ဆက်ဆံမှု၏ အမြင့်မားဆုံးသောပျော်ရွှင်မှုအား ယောကျ်ားနှင့်ဇနီးနှစ်ဦးလုံးသည် ခရစ်ယာန် များ ဖြစ်ကြပြီး သခင်၌ တလုံးတဝတည်းဖြစ်ချိန်တွင်ရရှိသည်။ ဤသို့ဖြစ်ပါက သူတို့သည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် မခံစားရနိုင်သော တလုံးတဝတည်းဖြစ်မှုကို တွေ့ကြုံခံစားရမည်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်က အိမ်ထောင်ရေးအတွင်းရှိ လိင်ဆက်ဆံမှုကိုသာ ကောင်းချီးပေးသည်။ နှုတ်ကပတ်တော်၌ ဘုရားသခင်က ““သင်၏စမ်းရေးတွင်း၌ မင်္ဂလာရှိစေ၍ အသက်ပျိုရွယ်စဉ်ကာလ၊ ပေါင်းဘော်သောမယားနှင့်အတူ၊ ပျော်မွေ့လော့””ဟုဆိုသည်။
ဘုရားသခင်သည် အိမ်ထောင်ရေးဘဝရှိ ချစ်ရေးချစ်ရာကို ထောက်ခံကြောင်းကို အထက်ပါကျမ်း ပုဒ်အား ကြည့်ခြင်းဖြင့် သိနိုင်သည်။ ဘုရားသခင်သည် ဝမ်းမြောက်ဖွယ် အိမ်ထောင်ရေးနှင့် သာယာသော အိမ်လေးကို မြင်လို သည်။ သင်သည် နှစ် ၄၀ ကြာ အိမ်ထောင်ရေးဘဝ၌ ကျင်လည်နေပါက၊ ဘုရားသခင် က သင်နှင့်သင့်ဘဝအဖေါ်အား အချစ်များဖြင့် ပြည့်လျက်ရှိသော နှစ်၄၀ ကို ရရှိစေလိုသည်။ အောက်ပါ ဇယားကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် သင်၏ဒိတ်လုပ်သည့် အချိန်မှာ တိုတောင်းပြီး လက်ထပ်ထားသည်နှစ်များမှာ များစွာကြာရှည်ကြောင်းကို သိနိုင်သည်။
သင်နှင့်သင့်တော်သောသူ၊ မှန်သောအချိန်နှင့် မှန်ကန်သောအခြေအနေမျိုးကို စောင့်ဆိုင်းခြင်းသည် သင့်ဘ၀ အတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်။ ဤအချက်သည် ကောင်းမွန်သော လက်ဆောင်ဖြစ်သည့် လိင်နှင့်လည်း သက်ဆိုင် သည်။ သင်သည် ခဏတာမျှပျော်ရွှင်ကျေနပ်မှုကို ရွေးချယ်နိုင်သော်လည်း၊ နောက်ပိုင်းတွင် သင်ပြုသောအမှု၏ ခါးသီး သော အသီးများကို ရိတ်သိမ်းရလိမ့်မည်။ ထိုသို့မဟုတ်ဘဲ သင်သည် မှန်သောလူ၊ မှန်ကန်သောအချိန်ကို စောင့်ဆိုင်း နိုင်ပြီး နှစ်ပေါင်းကြာရှည်စွာ လိင်ကိစ္စကို သင့်လက်တွဲဖော်နှင့်အတူ အပြည့်အ၀ ခံစားနိုင်သည်။
လိင်သည် ကစားပွဲမဟုတ်သလို ကစားစရာအရုပ်လည်းမဟုတ်ပါ။ အိမ်ထောင်ရေးဘဝ၏ တဦးကို တဦး ဆက်ကပ် အပ်နှံထားမှုနှင့် လုံခြုံမှုအောက်၌ ဝမ်းမြောက်စွာခံစားရမည့်အရာဖြစ်သည်။
အနှစ်ချုပ်ပါက၊ ခဏတာစိတ်လှုပ်ရှားသာယာမှုအတွက် လိင်ဆက်ဆံမှု၏ ရေရှည် အကျိုးအမြတ် အခွင့် ထူးများ ကို မစွန့်လွှတ်ပါနှင့်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် စိတ်လှုပ်ရှားမှုကို ယခုပင်ရလိုကြသည်။ စိတ်ရှည်သည်းခံမှုရှိရန် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် မလွယ်ကူပါ။ သင်၏ချစ်ခင်စုံမက်သောစိတ်ကို စောင့်ထိန်းရန်မှာ မလွယ်ကူပါ။ သင်၏လိင်ဆန္ဒအာသီသ ကို ငြင်းပယ်ရန်မှာလည်း မလွယ်ကူပါ။ အိမ်ထောင်ရေးဘဝ၏ အပြင်ဘက်မှာ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စများ၌ ပျော်မွေ့နေကြသောသူများကို အားမကျ မိအောင် စိတ်ကိုထိန်းဖို့ရန်လည်း မလွယ်ကူပါ။ သို့သော် ဘုရား သခင်၏ နည်းလမ်းသည်သာ အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
လူငယ်များပြောကြသည့် ““ဂိတ်ဆုံးသွားပြီ””ဆိုသည့်စကားမှာ ဈေးပေါသောလိင်သာဖြစ်သည်။ အဖိုးထိုက်သော အချစ် မှာ အခြားအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ လူနှစ်ဦးသည် တဦးကိုတဦးပေးအပ်ထားပြီး အိမ်ထောင်ရေးဘဝ၌ လုံခြုံစိတ်ချမှု ရှိစွာ အသက်ရှင်နေထိုင်ကြချိန်တွင် ဤသို့သောအဖိုးထိုက်သည့် အချစ် ကိုခံစားရသည်။
ဤသင်ခန်းစာကို ရေးသောသူအနေဖြင့် ကျွန်တော်အကြောင်းကိုလည်း နည်းနည်းပြောပြပါရစေ။ ကျွန်တော့် မိန်းမနှင့် ကျွန်တော်သည် အချစ်ဖြင့်ပြည့်နှက်လျက်ရှိသော ၆၅ နှစ်တာကို အတူဖြတ်သန်းလာကြပြီး နောက်ထပ် နှစ်တွေ ကို လည်း အတူဖြတ်သန်းနိုင်ဖို မျှော်လင့်ထားပါတယ်။ ဘုရားသခင်က ကျွန်တော်တို့ကို ကလေး ၆-ယောက်ပေးထားပြီး သာယာပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ ရက်တွေကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဝမ်းနည်းကြေကွဲစရာ ကိစ္စနဲ့လည်း တွေ့ကြုံ ဖူးပါ တယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အကြီးဆုံးသားဟာ အသက် (၇)နှစ်မှာ ကားမတော်တဆဖြစ်မှုနဲ သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ လက်ထပ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ဟာ ချစ်ရည်လူးနေပါတယ်။ သို့သော် နှစ်ပေါင်းကြာလာတာနဲ့အမျှ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အချစ် ဟာ ပိုပြီးနက်ရှိုင်းသန်မာလာပါတယ်။ ယောကျ်ားတစ်ဦးနဲ့ ချစ်ကျွမ်းဝင်နေတဲ့အချိန်မှာ ရှိသင့်တဲ့ထူးခြား တဲ့လှပမှုမျိုး ကျွန်တော့်မိန်းမမှာရှိပြီး သူမချစ်တဲ့သူ ချစ်မြတ်နိုးခြင်းကို ခံရတာကိုလည်း သူမသိခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ဟာ လက်မထပ်မီ မိမိကိုယ်ကို စောင့်ရှောက်နိုင်ခဲ့ပြီး လိင်ကိစ္စတွေနဲ့ မပါဝင်မပတ် သက် မိခဲ့တဲ့ အတွက် ဘုရားသခင်အား ကြိမ်ဖန်များစွာ ကျေးဇူတင်ခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ ချစ်သူတွေ ဖြစ်ဆဲဖြစ်ပြီး လက်ချင်း ချိတ်လျက်ရှိတုံးပါပဲ။ ဒီနှစ်တွေတစ်လျှောက်လုံးမှာ တစုံတဦးနဲ့ချစ်ကျွမ်းဝင်နေ ရတာ ဟာ အလွန်ကောင်းမွန်ခဲ့ပါတယ်။
သင်က ““သိပ်လှပတဲ့ချစ်ပုံပြင်ပဲ””ဟု ပြောလိမ့်မည်။ ဟုတ်ပါတယ်။ ဘုရားသခင်ရည်ရွယ်ထားသော အိမ်ထောင်ရေးဘဝမှာ ထိုကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ သင်၏အိမ်ထောင်ရေးကိုလည်း ထိုကဲ့သို့ပင်ဖြစ်စေလိုသည်။
သင်းအုပ်ဆရာ George Gardner ၏သက်သေခံချက်
ဆယ်ကျော်သက်လေးတဦးသည် ကျွန်တော်၏စာကြည့်ခန်းထဲသို့ဝင်လာပြီး ဤသို့ရင်ဖွင့်ခဲ့သည်။ ““ဆရာ၊ ဆရာနဲ့စကားပြောလို့ရမလား၊ ကျွန်မမှာ ပြသနာတစ်ခုရှိနေတယ်”” ““ဘာကိစ္စလဲ””ဟု ကျွန်တော် မေးလိုက်သည်။ ““ကျွန်မနဲ့ ချိန်းတွေ့တဲ့သူတွေနဲ့ပတ်သက်ပါတယ်”” ““သမီးချိန်းတွေ့တဲ့သူတွေက ဘာမှား နေလို့လဲ”” ““ကျွန်မ မသိဘူးရှင့်။ သူတို့က အမြဲတမ်းအမှားအယွင်းတွေနဲ့ပဲ အဆုံးသတ်သွားတယ်။ ကျွန်မ သိလာတာတစ်ခုက ကျွန်မ ခရစ်ယာန်မဖြစ်မီ ဒိတ်လုပ်ခဲ့တဲ့သူတွေထက် ဘုရားကျောင်းက ကောင်းလေး တွေကအများကြီး ပိုသွက်နေတယ်လို့ ကျွန်မ ထင်တယ်။ ကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲ အဲဒီအချက်က မှန်နေတယ်ရှင့်။ သူမကဤသို့ဆက်ပြောသည် ““ကျွန်မ ဘာဆက် လုပ်ရမလဲ? ကျွန်မသခင်ကို အစေခံလိုတယ်။ ခရစ်ယာန်တဦးဖြစ်လိုတယ်။ ကျွန်မဟာ သက်သေခံကောင်းတဦးဖြစ်လိုပြီး သန့်ရှင်းစေင်ကြယ်လိုတယ်။ ကျွန်မဘာလုပ်ရမလဲ၊ ကျွန်မအပျိုကြီးမဖြစ်လိုဘူး”” ထိုအခါ ကျွန်တော်က ““ကလေး၊ မင်းအပျိုကြီးဖြစ်စရာ အကြောင်းမရှိပါဘူး။ ငါ့ကိုယုံပါ။ ဒါပေမယ့် သမီးလုပ်ရမယ့်အရာရှိတယ်။ “ကောင်းပြီး ကျွန်မ ဘာလုပ် ရ မလဲ”ဟုသူမက မေးသည်။ “သမီးကိုတစ်ခုမေးပါရစေ။ သမီးနဲ့ဒိတ်လုပ်နေတဲ့ ကောင်လေးက ခရစ်ယာန် လား? ဆရာ၊ သူ့ကိုသိပါတယ်။ “မိမိကိုယ်ကိုခရစ်ယာန်ပါလို့ ဝန်ခံတဲ့ကောင်လေးတဦးပါ” “သမီးကလည်း ခရစ်ယာန်ပဲ၊ ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။” “ဟုတ်ကဲ့ရှင်” “သမီးရဲ့ ဒိတ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး ဆုတောင်း ပေးမယ် ဆိုတဲ့ အတွေးမျိုး သမီးမှာ ရှိခဲ့ဖူးလား?” “ဒိတ်လုပ်ထားတဲ့သူနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဆုတောင်းပေးရမယ်၊ ဟုတ်လား?” “ဟုတ်တာပေါ့ သမီး၊ ဘာများ ထူးဆန်း နေလို့လဲ” “သမီးနဲ့ဒိတ်လုပ်ထားတဲ့သူအတွက် ဆုတောင်းပေးရင်၊ သမီးဟာပျော့ညံ့တယ်လို လူတွေက ထင်မှာ ပေါ့ရှင့်” လူငယ်စည်းဝေးပွဲ၊ ကွာယာမတိုင်မီ၊ Sundayschool တို့အတွက်ဆိုရင်တော့ ဆုတောင်း ပေးရမှာပေါ့။ ဒါပေမယ့် ဘယ်သူက ဒိတ်လုပ်ထားတဲ့ သူနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဆုတောင်းပေးမှာလဲ” “သမီးပြောတာကို နားထောင်ပြီး ဆရာ စဉ်းစား မိတာက သမီးကစပြီး ဘာကြောင့်မလုပ်ရမှာလဲ သမီးဒိတ်လုပ်ထားတဲ့သူအပေါ်မှာ ကောင်းချီး ပေးဖို့ ယခုပင် ဆုတောင်း လိုက်ပါ။” “ဟုတ်ကဲ့ရှင့်၊ ဒီလိုလုပ်ခြင်းက အခြေအနေကို ပြောင်းလဲသွားစေမှာပဲ ဆရာ လုပ်စေလိုတာက အဲဒီလိုလား၊ ကြိုးစားကြည့်ပါမယ်ရှင်” “သခင်က ဆုတောင်းပဌာနာပြု”ဟု ပြောထားတာပဲ။ ထိုသို့ဆုတောင်းခြင်းက ဘာများ မှားနေ လို့ လဲ၊ သမီ”။
ထိုသို့ ဆုတောင်းပေးရန်အတွက် သူမ တစ်ခါမှ မစဉ်းစားဖူးပေ။ သို့သော် သူမသည် ကျွန်တော်၏ အကြံဉာဏ် ကို လက်ခံလိုက်ပြီး ကြိုးစားကြည့်ခဲ့သည်။ နှစ်ပတ်ခန့်ကြာပြီးနောက် သူမပြန်ရောက်လာသည် သူမ၏မျက်နှာမှာ ပြုံးဖြီးဖြီး ဖြစ်နေသည်။ “အခြေအနေဘယ်လိုလဲ၊ သမီး”ဟု ကျွန်တော်ကစူးစမ်းလိုက်သည် ““အရမ်းကောင်းတာပဲရှင်”” ““ဘာတွေ ဖြစ်ခဲ့လဲသမီး”” ““သမီးကောင်းလေးက၊ သမီးကိုအိမ်မှာလာကြိုပြီး ကားထဲကိုအတူ ဝင်ပြီးနောက်၊ ကားစက်မနှိုးခင်မှာ သမီးက “ခဏစောင့်ပါဦး” “ဘာကြောင့်လဲ”ဟု သူကပြောသည်။ “ကျွန်မတို့ ဒီညဘာလုပ်ကြမလဲ” “ငါမသိဘူးလေ” “ဒါဆို ကျွန်မ အခုဘာလုပ်ချင်လဲဆိုတာကို ရှင့်ကိုပြောပြမယ်” “ဘာလုပ်ချင်လို့လဲကွာ” “ကျွန်မတို့ ယခု ဒိတ်လုပ်တာအတွက် ဆုတောင်းချင်တယ်”။ သူ၏မျက်နှာကို သံပရာသီးနှင့်ပေါက်တာတောင်မှ သူ အဲ့ဒီလောက် အံ့သြ သွားလိမ့်မယ်လို့ မထင် ဘူးရှင်။ သူကတအံ့တသြဖြင့် ““မင်း၊ ဘာပြောလိုက်တယ်” မင်းလုပ်ချင်တာကဘာ?” “ကျွန်မတို့က ခရစ်ယာန်တွေ မဟုတ်လား” “ဟုတ်တယ်” ဒါဆို ဘာကြောင့် ကျွန်မတို့ချိန်းတွေ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဆုမတောင်းရမှာလဲ၊ ရှင်က ကျွန်မတို့ ဒိတ်လုပ်တာအတွက် ဆုတောင်းပေးပါလား။ “ငါဆုမတောင်းဘူး၊ ဒါကမင်းအိုင်ဒီယာပဲ၊ မင်းပဲ ဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆုတောင်းပါ။” ထိုအခါ ကျွန်မက သခင်၏လက်တော်ကို ကျွန်မတို့နှစ်ဦးအပေါ်ထားရှိရန် သက်သေခံ ကောင်းများ ဖြစ်ရန် နှင့် ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသော အချိန်လေးကို အတူတကွဖြတ်သန်းနိုင်ရန်အတွက် ဆုတောင်းခဲ့သည်။ ““ဆရာ၊ သမီး လုပ်ခဲ့တဲ့ ဒိတ်တွေထဲမှာ အဲ့ဒီဒိတ်ဟာ အကောင်းဆုံးပါပဲ”။ အခြေအနေတွေဟာ အလွန်ကောင်းနေပါတယ်။ အရင်က မသိရှိ၊ မခံစားဖူးတဲ့ ရိုသေလေးစားမှုကိုလည်း ခံစားရပါတယ်။
၁။ လိင်၏လှုံ့ဆော်မှု့၊ တွန်းအားသည် အပြစ်မရှိသော်လည်း ဘုရားသခင်က ဤလှုံ့ဆော်မှုဆန္ဒကို ထိန်းချုပ်ထားရန် ပြောထားသည်။
၂။ မတရားသောမေထုန်၌မှီဝဲခြင်းသည် အဓိကအပြစ်ကြီးတစ်ခုမဟုတ်ပါ။
၃။ မိန်းခလေးများသည် ထိတွေ့ခြင်းအားဖြင့် ကနဦးအဆင့်လှုံ့ဆော်ခြင်းကိုခံရသော်လည်း၊ ယောကျ်ားများမှာမူ ထိတွေ့ခြင်းအားဖြင့်သာမက၊ သူတို့မြင်သောအရာများအားဖြင့်လည်း လှုံ့ဆော် ခြင်းကိုခံရသည်။
၄။ လိင်ဆက်ဆံမှုသည် အရေးတကြီးလုပ်ရမည့်ကိစ္စမဟုတ်ပါ။ လိင်၏တွန်းအား၊ လှုံ့ဆော်မှုကို ငြင်းပယ်ခြင်းအားဖြင့် သင်၌မည်သည့်အန္တရာယ်မျှ ကျရောက်လာမည်မဟုတ်ပါ။
၅။ ကျွန်ုပ်၏အပြစ်များသည် ခွင့်လွှတ်ခြင်းခံရမည်ဖြစ်သော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်ခဲ့မှု၏ အကျိုးဆက်ကိုမူ ရိတ်သိမ်း ရမည်။
၆။ ဘုရားသခင်က သောဒုံနှင့်ဂေါမောရမြို့ကိုဖျက်ဆီးခဲ့ခြင်းမှာ လိင်တူဆက်ဆံမှုသည် ထိုမြို့တို့၌ အလွန်များပြားသော ကြောင့် ဖြစ်သည်ဟု ပြောထားသည်။
၇။ ကျီစယ်ခြင်းအားဖြင့် လိင်ကိစ္စတို့ကို မလုပ်မိပါက၊ ကျီစယ်ခြင်းသည် “အိုကေ” ပါသည်။
၈။ တနေ့တွင် တစုံတဦးက တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်မည့်အရာကို ယူလည်းမယူသင့်သလို၊ ပေးလည်း မပေး သင့်ပါ။
၉။ လိင်ပိုင်းအရ လှုံ့ဆော်မှုကို စဉ်ဆက်မပြတ် ရှာဖွေနေပါက သင်သည် လုပ်မိမည်သာဖြစ်သည်။
၁၀။ လိင်ဆိုသည်မှာ အိမ်ထောင်ရေးဘဝ၏ လုံခြုံစိတ်ချမှုနှင့် ဆက်ကပ်အပ်နှံမှုအတွင်း၌ ဝမ်းမြောက် စွာ အသုံးပြုရမည့် ဘုရားသခင်၏ လက်ဆောင်ဖြစ်သည်။
သင်ခန်းစာ (၂) ချစ်ခြင်းမေတ္တာအမျိုးအစား (၃) မျိုး
ဂျပ်စတင်က သူသည် တချိန်တည်း၌ ကောင်မလေး(၃)ဦးနှင့် ချစ်ကျွမ်းဝင်နေသည်ဟု သူထင်ခဲ့ သည်။ Karen သည် ဂျပ်စတင်နှင့်အသင်းတော်တစ်ခုတည်းကဖြစ်ပြီး ဘုရားကျောင်းဝတ်ပြုစည်းဝေးပွဲများတွင် မကြာခဏတွေ့ကြသည်။ ဤကောင်မလေးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ထူးခြားတာတစ်ခုခုရှိသည်။ သူမသည် သခင့်ထံမိမိကိုယ်ကို လုံးဝဆက်ကပ်အပ်နှံထားပြီး တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်ခြင်းကင်းမဲ့၍ အခြားသူများ အတွက် အမြဲတမ်းစဉ်းစားပေးသည်။ သူမနှင့်အတူရှိစဉ်အချိန်အတွင်း ဂျပ်စတင်သည် ကြီးကျယ်စွာ တွေးတောပြီးအိပ်မက်ကြီးကြီးမားမား မက်လေ့ရှိသည်။ သူသည် လှုံ့ဆော်ခြင်းကိုခံရပြီး သခင်အတွက်နှင့် အခြားသူများအတွက် အစေခံပေးသည်။
ထို့နောက် Sandra ဆိုသောကောင်မလေးရှိသည်။ သူမသည် ဂျပ်စတင်နှင့်ဘေးချင်းကပ်အိမ်နီးချင်း ဖြစ်ပြီး ဂျပ်စတင်နှင့်အတူ ကြီးပြင်းလာသူဖြစ်သည်။ သူနှင့်သူမအကြားတွင် မည်သည့်ကိစ္စကိုမဆို ပြောဆို ဆွေးနွေးနိုင်သည်။ သူမသည် အားကစားထူးချွန်ပြီး ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေတတ်သူဖြစ်သည်။ အကောင်းဆုံး အချက်မှာ သူမသည် သူ့ကိုအမှန်တကယ်နားလည်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ သူ့တွင် ပြဿနာတစ်ခုခုရှိပြီး အကြံဉာဏ်လိုအပ်ပါက၊ ဂျပ်စတင်သည် သူမထံသို့သာ တည့်တည့်မတ်မတ်သွားခဲ့သည်။ သူသည် သူမ အတွက်နက်ရှိုင်းစွာဂရုစိုက်သော်လည်း သူမကို တစ်ခါမှ မနမ်းခဲ့ပါ။ အမှန်မှာ သူသည် သူမအား နမ်းလို စိတ်ပင်မရှိပါ။ Sandra အပေါ်တွင်ထားသော သူူမကို တစ်ခါမှမနမ်းခဲ့ပါ။ အမှန်မှာ သူသည် သူမအားနမ်းလို စိတ်ပင်မရှိပါ။ သူသည် သူမ အတွက် သူ၏မေတ္တာ မှာ ၅၂၈ မေတ္တာမျိုးသာဖြစ်သည်။
ဂျပ်စတင်၏ဘဝရှိ တတိယမြောက်မိန်းကလေးမှာ Linda ဖြစ်သည်။ သူမသည် လုံးဝဥဿုံ ကြွေလောက်သော သူ ဖြစ်သည်။ သူမတွင် လှပသောမျက်နှာလေးရှိရုံသာမက ကိုယ်ခန္ဓာလှပကျော့ရှင်းသူ ဖြစ်သည်။ သူသည် သူမနှင့် ပါတီပွဲများသို့ အတူတူသွားရခြင်းအတွက် အလွန်ပင်ဂုဏ်ယူခဲ့သည်။ သို့သော် သူတို့သည် ချိန်းတွေ့ကြ သောအခါ သူတို့အကြားတွင်ဆွေးနွေးစရာကိစ္စများ မရှိသလောက်ပင်ဖြစ်သည်။ သူတို့နှစ်ဦးအကြားရှိ ဆွဲဆောင်မှုမှာ အများအားဖြင့် ခန္ဓာပိုင်းအရ ဆွဲဆောင်မှုသာဖြစ်သည်။
ဂျပ်စတင်၏အချစ် (၃) ချစ်က အချစ်အမျိုးအစား (၃)မျိုးရှိသည်ဆိုသည့်အချက်ကို ဖော်ပြသည်။ လူငယ်အများစု သည် တချိန်ချိန်တွင် လက်ထပ်လိုကြပြီး ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်း၍အောင်မြင်သောအိမ်ထောင် ရေးကိုသာ လိုချင်မည်မှာ အမှန်ပင် ဖြစ်သည်။ သို့သော် ဤကဲ့သို့အိမ်ထောင်ရေးမျိုးကို အလွယ်တကူမရ နိုင်ပါ။ အမှန်မှာ အိမ်ထောင်ရေး နှစ်ခု အနက် တစ်ခုမှာ ကွာရှင်းခြင်းဖြင့်သာ အဆုံးသတ်သွားလေ့ရှိသည်။ ဤအချက်ကဆိုလိုသည်မှာ လက်ထပ်ထားသော လူများ၏ တစ်ဝက်ခန့်မှာ သူတို့သည် ချစ်ကျွမ်းဝင်နေသည် ဟုထင်ကြသော်လည်း အလျင်အမြန် အဆုံးသတ်သွားလေ့ ရှိသူတို့၏အိမ်ထောင်ရေးကဲ့သို့ လက်လျှော့အရှုံးပေးလိုလာကြသည်။ အိမ်ထောင်ဖက်အများစုသည် အချင်းချင်း မုန်းတီး ခြင်းအားဖြင့် အဆုံးသတ်သွားပြီး ကံကောင်းသောအချို့ အိမ်ထောင်ဖက်များသာ ဆက်လက်အဆင်ပြေစွာ ပေါင်းသင်း နိုင်ကြ သလော၊ အိမ်ထောင်ရေးသည် လူအများစုရှုံးနိမ့်သွားသော လောင်းကစားပွဲတစ်ခုဖြစ်သလော၊ မဟုတ်ပါ။ ထိုသို့ မဟုတ်ပါ။ ပျော်ရွှင်ဖွယ် ကောင်းသောအိမ်ထောင်တစ်ခုတွင် မရှိမဖြစ်ပါဝင်ရမည့်အရာများရှိသည်။
သာယာပျော်ရွှင်သောအိမ်ထောင်ရေးတစ်ခုတွင် ရှိရမည့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာအမျိုးအစား (၃)မျိုးရှိသည်။ ဤအမျိုး အစား (၃)ခုကို ပိရမစ်တစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်လိုက်ပါက၊ ကျွနု်ပ်တို့နားလည်နိုင်ရန် အကူအညီ ပေးလိမ့်မည်။ ပိရမစ်၏ အောက်ဆုံးအဆင့်တွင် အဂ္ဂါပေ ဆိုသော အထူးချစ်ခြင်းမေတ္တာအမျိုးအစားရှိသည်။ အလယ်အဆင့်တွင် ၅၂၈ ချစ်ခြင်း မေတ္တာ အမျိုးအစားရှိပြီး၊ ထိပ်ဆုံးတွင် ခန္ဓာ (သို့) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိသည်။
အဂ္ဂါပေ ဟူသောဂရိစကားလုံးကို အထူးချစ်ခြင်းမေတ္တာအမျိုးအစားတစ်ခုအား ဖော်ပြရာတွင်အသုံး ပြုသည်။ ဤစကားလုံးအားအသုံးပြုရခြင်းအကြောင်းအရင်းမှာ ဤသို့သောမေတ္တာကိုဖော်ပြရန်အတွက် အင်္ဂလိပ်စကားလုံး မရှိသော ကြောင့် ဖြစ်သည်။
အဂ္ဂါပေချစ်ခြင်းမေတ္တာဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။ ယင်းမေတ္တာမှာ အခြားသူတဦး၏အထွတ်အထိပ် ကောင်းကျိုး အတွက် မိမိကိုယ်ကိုစွန့်လွှတ်ပေးဆပ်သော မေတ္တာမျိုးပင်ဖြစ်သည်။
(၁) ဤမေတ္တာသည် တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်ခြင်း လုံးဝကင်းမဲ့သည်။
(၂) ဤမေတ္တာသည် ဆက်ကပ်အပ်နှံထားမှုရှိသောမေတ္တာမျိုးပင်ဖြစ်သည်။ မိမိချစ်သောသူက ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဆက်လက် ချစ်မြတ်နိုးနေသော မေတ္တာဖြစ်သည်။
၁ကောအခန်းကြီး (၁၃)ကို အချစ်အခန်းကြီးဟုခေါ်သည်။ အကြောင်းမှာ ချစ်ခြင်းမေတ္တာက မည်သို့ပြုမူသလဲ ဆိုတာ ကို ပြောထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာက ဤနည်းလမ်းအားဖြင့် မိမိ ကိုယ်ကိုထုတ်ဖော်ပြသသည်။
မေတ္တာသည် စိတ်ရှည်တတ်၏။ ကျေးဇူးပြုတတ်၏။ မေတ္တာသည် ဂုဏ်ပြိုင်ခြင်းမရှိ။ ဝါကြွားခြင်း မရှိ။ မာန်မာန မရှိ။ မလျောက်ပတ်စွာမကျင့်တတ်။ ကိုယ်အကျိုးကိုမရှာတတ်။ ဒေါသအမျက်မထွက်တတ်။ အပြစ်ရှိသည်ဟုမထင်တတ်။ မတရားသောအမှု၌ ဝမ်းမြောက်ခြင်းမရှိတတ်။ သမ္မာတရား၌ဝမ်းမြောက် တတ်၏။ ခပ်သိမ်းသောအရာကို ဖုံးအုပ်တတ်၏။ ခပ်သိမ်းသောအရာကိုယုံတတ်၏။ ခပ်သိမ်းသောအရာ ကိုမျှော်လင့်တတ်၏။ ခပ်သိမ်းသောအရာကို သည်းခံတတ်၏။ မေတ္တာသည် ဖောက်ပြန်ခြင်းသဘောနှင့် အစဉ်ကင်းလွတ်၏။
အဂ္ဂါပေချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် ထူးခြားသောခံစားချက်တစ်ခုသာမဟုတ်ပါ။ စိတ်အလို၏တိကျစွာ ရွေးချယ်မှု ပင် ဖြစ်သည်။ အဂ္ဂါပေအချစ်နှင့် ပတ်သက်၍အံ့သြဖွယ်အရာများထဲမှတစ်ခုမှာ ဤအရာဖြစ်သည်။ သင်သည် တစုံတဦးအား တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်ခြင်းကင်းမဲ့စွာဖြင့် ချစ်၍နှစ်လိုဖွယ်သူ့အပေါ်တွင် ပြုမူဆက်ဆံရန်အတွက် ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ပါက၊ အချိန်တန်သောအခါ သူ့အပေါ်တွင်ချစ်လာနိုင်သည်ကို ခံစားရမည်ဖြစ်သည်။
အဂ္ဂါပေချစ်ခြင်းမေတ္တာကို သင်ယူနိုင်ရန်အတွက် ထူးခြားကောင်းမွန်သောနေရာတစ်ခုကို ဘုရားသခင်က ကျွန်ုပ် တို့အား ပေးထားသည်။ ထိုနေရာမှာ မိမိတို့၏အိမ်ပင်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် အိမ်၌နေနေပါက ဘုရားသခင် က သင့်အား မေတ္တာကို အခြားအိမ်ထောင်စုဝင်တို့အားပြစေလိုသည်။ အခြားသူများအပေါ်မေတ္တာထားလိုသော ခံစားချက် ရှိ လာသည့်အချိန်ထိ စောင့်ဆိုင်းစရာမလိုပါဆိုသည့် အချက်ကိုသတိရပါ။ သင်သည် သူတို့အား ချစ်ရန် အတွက် ရွေးချယ် ဆုံးဖြတ်နိုင်ပြီး သူတို့အပေါ်တွင် စတင်၍နှစ်လိုဖွယ် ပြုမူဆက်ဆံနိုင်သည်။ ဤသို့လုပ်ခြင်းသည် သင်၏အနာဂတ် အိမ်ထောင်ရေး အတွက် အလွန်ကောင်းသောလေ့ကျင့်ခန်းပင်ဖြစ်သည်။
မည်သူမဆိုသည် မိမိလက်ထပ်ရန်ပြင်ဆင်ထာသည့် သူအပေါ်တွင်နှစ်လိုဖွယ်ပြုမူဆက်ဆံမည်မှာ သေချာသည်။ ထိုသို့ဆက်ဆံမှသာ သူတို့အတွက်အကျိုးရှိမည်ဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သို့သော် လက်ထပ်ပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက် နေ့စဉ်လုပ်ငန်းတာဝန်များရှိလာမည်ဖြစ်ပြီး သူတို့၏အခြေခံသဘာဝသည်ပေါ်လွင်လာမည်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သူတို့ သည် လက်ရှိမိသားစုဘဝတွင် တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်ပြီး မိမိအကျိုးကိုသာကြည့်ပါက၊ သူတို့၏ အနာဂတ် အိမ်ထောင်ရေး တွင်လည်း ထိုကဲ့သို့သာဖြစ်လိမ့်မည်။
လူငယ်လူရွယ်များလုပ်လေ့ရှိသည့် အကြီးမားဆုံးအမှားများထဲမှတစ်ခုမှာ မိမိတို့၏အိမ်တွင် မနေလိုသောကြောင့် အလျင်စလို လက်ထပ်ကြခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော် သင်သည် အိမ်၌နေထိုင်တတ်ရန်နှင့်အခြားမိသားစုဝင်များအား လက်ခံ ရန်၊ ချစ်တတ်ရန်အတွက် မသင်မယူမချင်း သင်သည် အိမ်ထောင်တစ်ခုကိုတည်ထောင်ရန်အတွက် အဆင်သင့် မဖြစ် သေးပါ။
အိမ်ထောင်ပြုရန် မစဉ်းစားမီတွင် သင်နှင့်လက်ထပ်မည့်သူအား အဂ္ဂါပေမေတ္တာမျိုးဖြင့်ချစ်နိုင်ရဲ့လားဆိုတာနှင့် သူကရော သင့်ကို အဂ္ဂါပေမေတ္တာမျိုးဖြင့်ချစ်နိုင်လားဆိုတာကို သိရှိရန်လိုအပ်သည်။
သာယာပျော်ရွှင်သောအိမ်ထောင်ဆိုသည်မှာ ပြီးပြည့်စုံသောလူနှစ်ဦး မတော်တဆတွေ့ပြီး လက်ထပ်ကြခြင်းမျိုး မဟုတ်ပါ။ ပြီးပြည့်စုံသောသူများဟူ၍မရှိပါ။ သာယာပျော်ရွှင်သောအိမ်ထောင်ရေး ဆိုသည်မှာ မပြီးပြည့်စုံသော လူနှစ်ဦး သည် တွေ့ဆုံပေါင်းဖက်ကြပြီး တစ်ဦးကိုတစ်ဦး တစ်ကိုယ်ကောင်း ဆန်ခြင်း ကင်းမဲ့၍ ဆက်ကပ်အပ်နှံမှုရှိသော အဂ္ဂါပေ မေတ္တာမျိုးဖြင့် ချစ်ကြသော အိမ်ထောင်ရေးကိုဆိုလိုသည် အဂ္ဂါပေအချစ်သည် မျက်ကန်းအချစ်မဟုတ်ပါ။ ဤအချစ်သည် အခြားသူ၏အပြစ်အနာအဆာများကို မြင်မည်ဖြစ်သော်လည်း ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြင့် ဖုံးကာလိုက်မည် ဖြစ်သည်။ သင်သည် တစုံတဦးကို အမှန် တကယ်ချစ်သောအခါ၊ သူတို့အား ပြောင်းလဲလာအောင် ပြုလုပ်ရန် သင်ကြိုးစားမည် မဟုတ်ပါ။ သူတို့၏ လက်ရှိဘဝ၌ပင် သူတို့အား သင်သည်လက်ခံ၍ချစ်မည်ဖြစ်သည်။ အဂ္ဂါပေအချစ်က ဤသို့ပြောသည်။ ““ဘာတွေပဲဖြစ်လာပါစေ၊ ကျွနု်ပ်သင့်ကိုချစ်မည်ဖြစ်ပြီး အမြဲတမ်းချစ်နေမှာပါ။”” သာယာပျော်ရွှင် အောင်မြင်သော အိမ်ထောင်ရေး တစ်ခု၌ ဤသို့သောမေတ္တာမျိုးရှိရန် မည်မျှမရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်ကို သင်တွေ့နိုင်ပြီးဖြစ်သည်။
အဂ္ဂါပေချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် အိမ်ထောင်ရေးအတွက်သာမဟုတ်ပါ။ ကျွနု်ပ်တို့သည် လူတိုင်းအပေါ်တွင် အဂ္ဂါပေ မေတ္တာမျိုးထားနိုင်အောင် ကြိုးစားသင့်သည်။ လူတိုင်းသည် ဘုရားသခင်၏ချစ်ခြင်းကို ခံရသူများဖြစ်သည်။ လူအယောက် စီတိုင်းသည် ဘုရားသခင်အတွက်အလွန်အမင်းအဖိုးထိုက်လှသည်။ သူ၏မေတ္တာသည် လူတိုင်းအပေါ်တွင် သက်ရောက်မှု ရှိသကဲ့သို့ ကျွနု်ပ်၏မေတ္တာမှာလည်း ထိုကဲ့သို့ ဖြစ်သင့်သည်။
အဂ္ဂါပေမေတ္တာနှင့်ပတ်သက်၍ ပြီးပြည့်စုံသောဥပမာတစ်ခုကို ဘုရားသခင်ကပေးထားသည်။ သူသည် အပြစ်ရှိ သောလူသားများဖြစ်သည့် သင်နှင့် ကျွနု်ပ်အတွက် သူ၏သားတော်ကိုကားတိုင်ထက်၌ သေစေခဲ့သည်။ ကျမ်းစာက ““ငါတို့သည်အပြစ်ရှိစဉ်ပင် ခရစ်တော်သည် ငါတို့အတွက်အသေခံတော်မူသည် ဖြစ်၍၊ ဘုရားသခင်သည် ငါတို့ကို အဘယ်မျှလောက် ချစ်တော်မူသည်ကို ငါတို့အားထင်ရှားစွာပြတော်မူ၏””
သူငယ်ချင်း (၅၂၈) ချစ်ခြင်းမေတ္တာ
ဤသို့သောနွေးထွေးသည့်မေတ္တာကို ကျွနု်ပ်တို့နှင့်ပလဲနံပသင့်သော မိတ်ဆွေကောင်းများအပေါ် တွင် ထားကြ သည်။ ဤသို့သောမေတ္တာမျိုးဖြင့်ချစ်နိုင်သော ယောက်ျားလေးမိတ်ဆွေများ၊ မိန်းခလေးမိတ်ဆွေများ သင့်တွင်ရှိသင့်သည်။ ခရစ်ယာန်များသည် လူတိုင်းအား အဂ္ဂါပေမေတ္တာဖြင့် ချစ်နိုင်ရန်ကြိုးစားသင့် သော်လည်း၊ လူတိုင်းနှင့် ရင်းနှီးသော မိတ်ဆွေများ မဖြစ်လာနိုင်ပါ။ ၅၂၈ မေတ္တာသို့ရောက်သောအခါ၊ ကျွနု်ပ်တို့၏ချစ်မြတ်နိုးခြင်းကို ခံရသောအရာများသည် ကျဉ်းမြောင်းသွားသည်ကို ပိရမစ်ကို ကြည့်ခြင်းဖြင့် တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။ တနည်းအားဖြင့် ၅၂၈ မေတ္တာမျိုးဖြင့် လူအချို့ ကိုသာ ချစ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
အောင်မြင်သောအိမ်ထောင်ရေးကို ရရှိရန်အတွက်၊ သင်နှင့်သင့်ခင်ပွန်းကြားတွင် ၅၂၈ မေတ္တာရှိရ မည်ဖြစ်သည်။ ထိုမှသာအတူတူပြောဆို၊ လုပ်ကိုင်ရခြင်း၊ အတူတူနေထိုင်ရခြင်းနှင့် တဦးကိုတဦးဝေမျှပေး ဆပ်ခြင်းတို့တွင် သင်သည် ဝမ်းမြောက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ခင်ပွန်းနှင့်ဇနီးကြားတွင် ရိုသေလေးစားမှုနှင့် ချစ်မြတ်နိုးခြင်းမရှိသောအိမ်ထောင်ရေးသည် အိပ်ရာပေါ်တွင် စိတ်ဆန္ဒပြင်းပြမှုများစွာရှိနေသော်လည်း ကျေနပ်နှစ်သက်စရာကောင်းသည့် အိမ်ထောင်ရေးမျိုး ဖြစ်မည်မဟုတ်ပါ။
ဤသို့သောမေတ္တာသည် ခင်ပွန်းနှင့်ဇနီးအကြားတွင်ရှိသော အရင်းနှီးဆုံးနှင့်အထူးခြားဆုံး ချစ်ခြင်းမေတ္တာ အမျိုုး အစား တစ်ခုပင်ဖြစ်သည်။ လိင်ပိုင်းအရမေတ္တာကို ကျွနု်ပ်တို့နှင့် လက်ထပ်မည့်သူတဦး အပေါ်တွင်သာ ထားသင့်သည်။ လိင်းပိုင်းအရမေတ္တာနှင့် ပတ်သက်လာလျှင် လူတဦးအပေါ်တွင်သာ ထားရမည်ကို ပိရမစ်၏ ထိပ်ဆုံးအဆင့်က အလွန် ကျဉ်းမြောင်းသွားခြင်းအားဖြင့်ပြသသည်။
အစအဦး၌ ဘုရားသခင်သည် လူယောက်ျားနှင့် မိန်းမကို ဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ သူတို့သည် တဦးကို တဦး တဘဝလုံး အတွက် ဆပ်ကပ်အပ်နှံထားကြသည်။ အိမ်ထောင်ရေးနှင့် ပတ်သက်လာလျှင် ဘုရားသခင်၏အစီအမံမှာ လူယောက်ျား တစ်ဦး နှင့် မိန်းမတစ်ဦးသည် တစ်ဘဝလုံးအတွက် အချင်းချင်းဆက်ကပ်အပ် နှံထားကြရန်ဖြစ်သည်။
ဘုရားသခင်သည် ကလေးများမွေးဖွားရန်အတွက်သာ မဟုတ်ဘဲ သာယာပျော်ရွှင်မှုအတွက်လည်း လိင်ကို ပေးထားခြင်းဖြစ်သည်။ ယောက်ျားနှင့် ဇနီးမယားသည် လိင်ဆက်ဆံခြင်းအားဖြင့် တဦးအပေါ်တွင် တစ်ဦး ထားသော မေတ္တာကို အပြည့်ဝဆုံး ပြသနိုင်သည်။ ဤသည်မှာ အိမ်ထောင်ရေးဘဝ၏အကြီးမားဆုံး ကောင်းချီးမင်္ဂလာနှင့် အခွင့်ထူး များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။
သင်၏အိမ်ထောင်ရေး၌ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ချစ်ချင်းမေတ္တာ၏ကောင်းချီးမင်္ဂလာကို ကာကွယ်ရန် ထိန်းသိမ်းရန် အတွက် ဘုရားသခင်က ဤအမိန့်ကိုပေးထားသည်။ ““ သူ့မယားနှင့်မပြစ်မှားရ”” ဤအမိန့်က လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အညစ် အကြေး အားလုံးကို တားဆီးသည်။ မတရားသော မေထုန်၌မှီဝဲသည်ဆိုသည်မှာ လက်မထပ်ရသေးသောယောက်ျားနှင့် မိန်းမ လိင်ဆက်ဆံခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ ဖောက်ပြန်ခြင်းဆိုသည်မှာ လက်ထပ်ပြီးသောသူက သူ့ခင်ပွန်းမဟုတ်သောသူ တစ်ဦးဦးနှင့် လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ အဓမ္မ မေထုန်နှင့် ဖောက်ပြန်ခြင်းနှစ်ခုစလုံးကို အခြားသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ညစ်ညူးခြင်းများနှင့်အတူ ဘုရားသခင်က တားမြစ်ထားသည်။
ဘုရားသခင်က လိင်ကိုမဆန့်ကျင်ပါ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအသုံးမှားခြင်းကိုမူဆန့်ကျင်သည်။ အမှန် မှာလိင်သည် ဘုရားသခင်၏ ကနဦးအကြံအစည်တစ်ခုပင်ဖြစ်သည်။ အိမ်ထောင်ရေးဘဝ၌ ဤအရာသည် ကျွန်ုပ်တို့ဝမ်းမြောက်နိုင်သော ကောင်းချီးများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်က ထိုသို့ဖြစ်စေလို သည်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာချစ်ချင်းမေတ္တာသည် ထူးခြားကောင်းမွန်သော်လည်း အောင်မြင်သော အိမ်ထောင်ရေး တစ်ခု၏ အုတ်မြစ်လုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါ။ စုံတွဲများစွာတို့သည် သူတို့၏အိမ်ထောင်ရေးကို ခန္ဓာပိုင်း ဆိုင်ရာ အချစ်(သို့) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ချစ်ခြင်းမေတ္တာပေါ်တွင် အခြေပြု၍ တည်ဆောက်ရန် ကြိုးစားကြသည်။ သူတို့၏အိမ်ထောင်ရေးသည် ခဏတာသာ တည်မြဲနိုင်ပြီး ဘဝ၏မုန်တိုင်းများ ကျလာသောအခါ သူတို၏အိမ်ထောင်ရေးသည် ရှုံးနိမ့်သွားမည်ဖြစ်သည်။ လိင်ဆိုင်ရာ မေတ္တာပေါ်၌ အခြေပြု၍သာယာအောင်မြင်သော အိမ်ထောင်ရေးကို မတည်ဆောက်နိုင်ကြောင်းကို သူတို့သည် အလွန် နောက်ကျမှ သိသွားကြလေ့ရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ချစ်ချင်းမေတ္တာအမျိုးအစား (၃)ခုစလုံးကိုလိုအပ်သည်။
ကျွန်ုပ်သည် ချစ်ချင်းမေတ္တာအမျိုးအစား(၃)ခုဖြစ်သည့် အဂ္ဂါပေ၊ သူငယ်ချင်း(၅၂၈)၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ချစ်ခြင်း မေတ္တာ အကြောင်းတို့ကို ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ဤ(၃)ခုထဲမှ ဘယ်မေတ္တာသည် အိမ်ထောင် ရေးဘဝတွင် အလိုအပ်ဆုံး ဖြစ်မည်နည်း? အဖြေမှာ (၃)ခုစလုံးပင်ဖြစ်သည်ဍ ခြေထောက်(၃)ချောင်းပါသော ခုံနှင့်တူသည်။ ဤခုံကို မလဲကျ စေရန်အတွက် ခြေထောက်(၃)ချောင်းစလုံးကို သင်လိုအပ် သည်။
သို့သော် ဤမေတ္တာအမျိုးအစား(၃)ခုသည် အစဉ်အတိုင်းအတူတကွဖြစ်တည်ရန်မှာ အလွန်အရေး ကြီးသည်။ ပထမဆုံးအနေဖြင့် သာယာပျော်ရွှင်သောအိမ်ထောင်ရေးတစ်ခုအတွက် သင့်တွင်အဂ္ဂါပေမေတ္တာ ရှိရမည်။ ဤမေတ္တာသည် အခြားသူ၏အထွဋ်အထိပ်ကောင်းကျိုးကိုသာ လိုလားသော တကိုယ်ကောင်း ဆန်ခြင်းကင်းမဲ့သည့် မေတ္တာဖြစ်သည်။ ထို့နောက်သင်သည် သူငယ်ချင်းမေတ္တာကို လိုအပ်သည်။ ဤသို သောမေတ္တာက ခင်ပွန်းယောက်ျားနှင့် ဇနီးသည် အတူတူ
ရှိရခြင်း၌ ဝမ်းမြောက်စေသည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့် ပျော်ရွှင်သောအိမ်ထောင်ရေး၌ စိတ်ကျေနပ်ဖွယ်ကောင်းသော လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ မေတ္တာရှိရမည်။
ကံမကောင်းစွာပင် လူငယ်အများစုသည် ခန္ဓာပိုင်း(သို့) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမေတ္တာအပေါ်တွင်သာ အလေးအနက် ထား အလျင်စလိုပြုလုပ်ကြသည်။ ဤအရာကသာ၍စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသော်လည်း၊ ဤသို့လုပ်ခြင်းက ပိရပစ်ကို ဇောက်ထိုးတည်ဆောက်နေခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ အလုပ် ဖြစ်မည်မဟုတ်ပါ။
ယောက်ျားဖြစ်သူနှင့် ငါးလကြာသာပေါင်းဖက်ပြီး ကွာရှင်းခဲ့သောမိန်းခလေးတစ်ဦးက သူ့ ယောက်ျားနှင့် ပတ်သတ်၍ ဤသို့ပြောခဲ့သည်။ ““ကျွန်မယောကျ်ားဟာ စစ်မှန်သောအချစ်နဲ့မချစ်တတ်ပါဘူး။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အချစ် သည် အစပိုင်း၌သူတို့နှစ်ဦးအတွက် ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးအရာဖြစ်ခဲ့သည်။ သူတို့နှစ်ဦးကြားတွင် ၅၂၈ မေတ္တာလည်း အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ရှိခဲ့သည်။ အကြောင်းမှာ သူတို့သည် ကစားပွဲများကိုအတူတူသွားရခြင်းနှင့် ဂီတအမျိုးအစား အချို့ကို အတူတူနားထောင်ရခြင်း၌ ဝမ်းမြောက်ခဲ့သည်။
ဘယ်အရာက ပျောက်ဆုံးနေသနည်း။ အခြားသူတစ်ဦး၏အထွတ်အထိပ်အကျိုးကို လိုလားပြီး တကိုယ်ကောင်း ဆန်ခြင်း ကင်းမဲ့စွာ ချစ်သောအချစ်သည်သူတို့နှစ်ဦးကြားတွင် ပျောက်ဆုံးနေခဲ့သည်။ ဤ သို့သောအချစ်သည် ဆက်ကပ် အပ်နှံခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီး လူနှစ်ဦးအားအတူတူရှိစေနိုင်ပြီး သူတို့၏ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းစေနိုင်သည်။ သင်သည် သင်၏အနာဂတ်အဖော်နှင့် တစ်ဦးကိုတစ်ဦး စစ်မှန်သော အဂ္ဂါပေမေတ္တာနှင့် ၅၂၈ မေတ္တာတို့ဖြင့်ချစ်နိုင်သည်ဟု သေချာမှ သာ လက်ထပ်သင့်သည်။
မေတ္တာအမျိုးအစား (၃)ခုကို ပိရမစ်တစ်ခုအနေဖြင့် စဉ်းစားခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ သို့သော် ပိရမစ်အား မခိုင်မာသော သဲပေါ်တွင်မဆောက်နိုင်ပါ။ မာကျောသောအုတ်မြစ်လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။
ကျွနု်ပ်တို့၏ပိရမစ်အခြေခံအုတ်မြစ်မှာ ဘုရားသခင်၏မေတ္တာတော်ပင်ဖြစ်သည်။ မိမိတို့ဘာသာ ဆိုလျှင် အခြားသူ များအား ကျွနု်ပ်တို့အဂ္ဂါပေမေတ္တာမျိုးဖြင့် ချစ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ယေရှုခရစ်တော်အား ကျွနု်ပ်တို့၏ကယ်တင်ရှင် အဖြစ် ယုံကြည်လက်ခံလိုက်ချိန်တွင် ထူးခြားအံ့သြဖွယ်အရာများထဲမှတစ်ခုသည်ဖြစ်လာသည်။ ဘုရားသခင်ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် ကျွနု်ပ်တို့၏နှလုံးသားအတွင်းသို့ သွန်းလောင်းခြင်း ကိုခံရသည်။ ကျမ်းစာက ““…ငါတို့အားပေးတော်မူသော သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်သည် ဘုရားသခင်၏ မေတ္တာတော်ကို ငါတို့စိတ်နှလုံးထဲသို့ ညွှန်းလောင်းတော်မူ၏။”ဟုဆိုသည်။ ရောမ ၅း၅
ကျွနု်ပ်တို့အတွင်းရှိ ဘုရားသခင်မေတ္တာတော်သည် အရာရာအားလုံးကို အလုပ်ဖြစ်စေသည်။ အခြားသူများအား အဂ္ဂါပေမေတ္တာမျိုးဖြင့် ချစ်လာနိုင်စေသည်။ ကျွနု်ပ်တို့၏မိတ်ဆွေများကိုလည်း ချစ်လာ နိုင်စေသည်။ ကျွနု်ပ်တို့၏ ဘ၀ လက်တွဲဖော်ကိုလည်း ဘုရားသခင်ရည်ရွယ်ထားသောပုံစံအတိုင်း ချစ်လာ နိုင်စေသည်။ ဤသို့ဖြင့် ကျွနု်ပ်တို့အိမ်သည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိကောင်းကင်ဘုံလေးဖြစ်လာနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
လူတိုင်းသည် သူတို့အတွက် အရေးပါသူတစ်ဦးဦး၏ချစ်မြတ်နိုးခြင်းကို ခံရရန်အလွန်အမင်းလို အပ်သည်။ ဤလိုအပ်ချက်သည် ငယ်ရွယ်သူများ၌ အလွန်ကြီးမားသောကြောင့် သူတို့သည် မှားသောနည်းလမ်းအားဖြင့် အချစ်ကို ရှာကြသည်။
ကျမ်းစာက ““နိုးကြားစွာ သင်၏နှလုံးသားကိုစောင့်ရှောက်ပါ”” ဟုပြောထားသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ အရာအားလုံး ထက် သင်၏ချစ်မြတ်နိုးခြင်းများကို စောင့်ထိန်းပါဟူ၍ ဆိုလိုသည်။ တနည်းအားဖြင့် သင်သည် တစုံတဦးနှင့်မျက်ကန်းပမာ အရူးအမူး ချစ်ကျွမ်းဝင်နေစရာမလိုပါ။ အရူးအမူးစွဲလမ်းခြင်း၏ လှုံ့ဆော်မှုကြောင့် မိုက်မဲသောအရာများကို မလုပ်မိ စေရန် အတွက် သင်၏စိတ်နှလုံးကိုစောင့်ထိန်းရမည်။
စစ်မှန်သောအချစ်သည် မျက်ကန်းအချစ်မဟုတ်ပါ။ တစ်စုံတစ်ဦးနှင့်ပါဝင်ပတ်သက်လိုလား၊ မလိုလား ဆိုတာကို သာမန်အသိတရားကိုအသုံးပြု၍ ဆုံးဖြတ်ရွေးချယ်ရမည်။ သင်သည် အချစ်နွံထဲသို့ နစ်သွားစရာမလိုပါ။ သင့်အတွက် မမှန်ကန်သောသူကိုမချစ်မိရန်အတွက် ရွေးချယ်ရမည်ဖြစ်သည်။ အလျင်စလိုမလုပ်ပါနှင့်။ သင်နှင့်သူ့ကြား၌ အဂ္ဂါပေ မေတ္တာရှိ၊ မရှိ ဆုံးဖြတ်ရန်နှင့် အရူးအမူးစွဲလမ်းခြင်း (သို့) ခန္ဓာပိုင်းအရ တပ်မက်ခြင်းပဲလားဆိုတာကို သိနိုင်ရန်အတွက် အချိန်သည် သင်၏အကောင်းဆုံး မိတ်ဆွေဖြစ်သည်။
Peggi ဆီမှ အောက်ပါစာက မိန်းကလေးတစ်ဦး၏အချစ်ကို ရှာပုံတော်ဖွင့်ပုံ၊ သူမလုပ်ခဲ့သော အမှားများ နှင့် နောက်ဆုံး၌ သူမကျားကုတ်ကျားခဲရှာနေသောအချစ်ကို မည်သို့ရှာတွေ့ခဲ့ပုံအကြောင်းကို ပြောပြထားသည်။
Peggi က ဒီလိုစာတစ်စောင်ကို လွန်ခဲ့တဲ့ ၉နှစ်လောက်က ရခဲ့ရင်သိပ်ကောင်းမှာပဲ။ ဒါပေမယ့် မရခဲ့ပါဘူး။ ကျွန်မရဲ့ အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့ ဒီစာကိုရေးရခြင်းအကြောင်းအရင်းကတော့ ယောကျ်ားတစ်ဦးဆီမှ စစ်မှန်တဲ့ အချစ်ကိုရလိုကြတဲ့ ဆယ်ကျော်သက်ကောင်မလေးတွေအတွက်ပဲ ဖြစ်ပါ တယ်။
ချစ်လှစွာသော ဆယ်ကျော်သက်လေးများ၊ ကျွန်မရဲ့ဘေးပတ်လည်မှာ လူတွေဟာ ချစ်ကျွမ်းဝင်နေ အချစ်နဲ့ အတူတူ ဘဝကိုဖြတ်သန်းနေကြပြီး သူတို့ရှာတွေ့ထားတဲ့အချစ်အားဖြင့် ရှင်သန်ကြီးထွားနေတာကို တွေ့ရတဲ့အတွက် ကျွန်မရဲ့အထီးကျန်မှုကို ပိုမိုကြီးထွားစေပါတယ်။ ယခုကျွန်မဟာ ကလေးနှစ်ဦးကို မွေးဖွားထားခဲ့ပြီး တစ်ဦးကို သူတစ်ပါးအားပေးလိုက်ပြီး တစ်ဦးကိုတော့ ပြုစုပျိုးထောင်ပေးဖို့ စတင်ကြိုး ပမ်းနေပါတယ်။
““ကျွန်မလိုချင်ခဲ့တဲ့ တစ်ခုတည်းသောအရာကတော့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာပါပဲ။ ကျွန်မ မျှော်လင့်ခဲ့တဲ့ တစ်ခုတည်း သောအရာကတော့ အိမ်တစ်အိမ်နဲ့တစ်ညတာကို ကောင်းမွန်စွာအိပ်ပျော်နိုင်ဖို့ ကျွန်မကိုဖက်ထားမည့် သန်မာတဲ့ လက်တွေ ပါပဲ။ မနက်ခင်းကို ကျွန်မနဲ့အတူကြိုဆိုမယ့်သူတစ်ဦးကိုသာ ကျွန်မလိုအပ် ခဲ့တယ်။””
ကျွန်မ ၁၅ နှစ်အရွယ်ရောက်တော့ နောက်လာမည့် ၉ နှစ်တာဟာ စိတ်ပျက်စရာများ၊ အထီးကျန်မှု များနဲ့ ဝမ်းနည်းစရာများကို ကျွန်မဆီ သယ်ဆောင်လာမယ်ဆိုတာကို ကျွန်မ မသိခဲ့ဘူး။ ယခုအသက် ၂၄ နှစ် အရွယ်မှာလည်း၊ ကျွန်မဟာ တစ်ယောက်တည်းပါပဲ။ သင်ဟာ သူ့အချစ်ကို သင့်ဆီရောက်လာဖို့ စောင့်ဆိုင်းနေစဉ်မှာ၊ ကျွန်မဟာ စောင့်ဆိုင်းခြင်းဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်ကို ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။ အကြောင်းမှာ ကျွန်မဟာ ဘယ်တော့မှမစောင့်ဆိုင်းလိုခဲ့ပါဘူး။ ကျွန်မဟာအချစ်ကို အလွန်ဆာလောင်နေခဲ့တာကြောင့် အစောကြီးကတည်းကအချစ်ကို အလျင်အမြန် မြည်းစမ်းခဲ့တဲ့ အတွက် ယခုမှာတော့ အချစ်အနည်းငယ်သာ ကျန်ပါတော့တယ်။
““သင်ချစ်သောသူတစ်ဦးအား “NO” ဟု ပြောလိုက်ခြင်းအားဖြင့် သူကသင့်ကို စွန့်ခွာသွားခြင်းသည် သင့်အတွက် အလွန်နာကျင်ဖွယ်ကောင်းလိမ့်မည်။ သို့သော် သင်က သူ့ကို “YES” ဟုပြောလိုက်ပြီးနောက်၊ သူကသင့်ကိုငြီးငွေ့လာပြီး သူ လက်ထပ်ချင်သောသူသည် သင်မဟုတ်ဟုပြောလိုက်ခြင်းသည် သင့်အတွက် ပို၍ နာကျင်ဖွယ်ကောင်းလိမ့်မည်။ သင်သည် ကျွန်မကို ယုံချင်မှယုံလိမ့်မည်။ သို့သော်ဤအရာဟာ အမှန်ပင်ဖြစ်သည်။
““သင့်ကို အမှန်တကယ်ချစ်သောသူသည် သင်၏ခန္ခာကို အရင်ဆုံးတောင်းဆိုလိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။ သူသည် စောင့်ဆိုင်းပြီး သူ့အားလက်ထပ်ရန်အတွက် တောင်းဆိုလိမ့်မည်။ သင့်အတွက် ပြင်ဆင်စီမံပေးရန်နှင့် သင်၏လိုအပ်ချက် များကို ဖြည့်ဆည်းပေးရန်အတွက် ကြိုးစားလိမ့်မည်။ ဤသို့လုပ်ခြင်းအားဖြင့် သင်၏ယုံကြည်မှု စိတ်ချမှုနှင့် သင့် စိတ် နှလုံး၏လျှို့ဝှက်ချက်များကို ရရှိရန်အတွက် သူကြိုးစားလိမ့်မည်။ သင်ပေးသောလက်ဆောင်၏ လှပမှု့ကို သူဟာ တန်ဖိုး ထားပြီး နှစ်ပေါင်းများစွာ သူရှာဖွေနေသော အဖိုးထိုက်သည့် ပုလဲတစ်လုံးကဲ့သို့ ညင်သာမြတ်နိုးစွာ စောင့်ရှောက် လိမ့်မည်။
သင့်ကို သင် တန်ဖိုးထားပါ။ အကြောင်းမှာသင်ဟာ အဖိုးထိုက်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ သင့်ကိုသင် မရောင်းစား ပါနှင့်။ ဆပ်ကပ်အပ်နှံမှု့ရှိ၍ စောင့်ဆိုင်းလိုသော အချစ်မှလွဲ၍ မည်သည့်ဈေးနှုန်းမဆို သင့် အတွက် မထိုက်တန်ပါ။ ဈေးပေါလွန်းလှသည်။ စောင့်ဆိုင်းခြင်းသည် သင့်အတွက် အလွန်ခက်ခဲလိမ့်မည်။ သင့်အတွက်ခက်ခဲခြင်းမှာ သင်ဟာ ငယ်ရွယ်ပြီး ခလေးတစ်ယောက်၏စိတ်မရှည်မှုမျိုးသည် သင့်တွင် ရှိနေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သည်းခံခြင်းကို သင်ယူပါ။ ဤသို့ သင်ယူခြင်းသည် မိမိကိုယ်ကို စည်းကမ်း ပေးခြင်း၏အစအဦးဖြစ်ပြီး အနှေးနဲ့အမြန် သင်ယူရမည့် သင်ခန်းစာ ဖြစ်သည်။ သင်သည် မြန်နိုင်သမျှ မြန်မြန်သင်ယူလေလေ သင်၏ဝမ်းမြောက်ခြင်းသည် သာ၍ကြီးထွား လေလေ ဖြစ်မည် ဖြစ်ပြီး သင်၏ဝမ်းနည်းမှုမှာမူ သာ၍လျော့နည်းသွားလိမ့်မည်။ ကျွန်မအဲ့ဒါကို ယခုသင်ယူရမှာကို သိပါတယ်။ အစောကြီး ကတည်းက ကျွန်မ သင်ယူသင့်ခဲ့ပါတယ်။
ယခုကျွန်မနဲ့ စိတ်ပျက်စရာအကောင်းဆုံးကိစ္စအကြားမှာ သူတစ်ဦးတည်းသာ ရှိပါတော့တယ်။ ထိုသူမှာ ယေရှုခရစ်ပင်ဖြစ်သည်။ သူသည်ကျွန်မ၏လက်ရှိဖြစ်နေသော ပုံစံကိုပင် ချစ်သည်။ ကျွန်မ အထီးကျန်မှုကို ထင်ဟပ် ဖော်ပြနေသော ကျွန်မ၏ပုံစံဖြစ်သည့် အမာရွတ်များစွဲထင်နေခြင်း၊ ကောက်လိမ်နေခြင်း၊ ကျိုးပဲ့ကြေမွနေခြင်းတို့သည် ကျွန်မ၌ဖြစ်နေစဉ်ပင် သူသည် ကျွန်မကိုချစ်သည်။ သူ၏မျက်စိ၌ ကျွန်မက ငယ်ရွယ် တက်ကြွလန်းဆန်းတဲ့ ကောင်မလေး တစ်ဦးဖြစ်နေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မရဲ့မျက်စိတွေဟာ အရောင် တလက်လက်တောက်ပနေပြီး ကျွန်မအပြုံးရဲ့ နောက်ကွယ် မှာလည်း နာကျင်ခြင်းတွေ မရှိဘူးလို့ ဘုရားသခင် က မြင်ပါတယ်။
““သူ့ရဲ့အချစ်ဟာ မပျောက်ကွယ်သွားပါဘူး။ သူ့အချစ်ဟာမနက်တိုင်းကျွန်မနဲ့အတူ နိုးထပြီး ခန်းဆီး ကုလားကို ဖွင့်ကာ နေ့သစ်ကိုကြိုဆိုပါတယ်။ ဤဘဝမှာ ကျွန်မဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ ကျွန်မရဲ့ကလေးကို လုံးဝမမြင်ရတော့တဲ့အတွက် ဖြစ်ပေါ် လာတဲ့ ကျွန်မရဲ့နာကျင်မှုတွေကို သက်သာစေပါတယ်။ မိမိ၏ ကိုယ်ကို ရောင်းစားခဲ့ခြင်းကြောင့် ရရှိခဲ့တဲ့ ကလေးကိုလည်း ပြုစုပျိုးထောင်နိုင်စေဖို့ကူညီထောက်ပံ့ပေးပါတယ်။
နောက်ဆုံးမှာ ကျွန်မဟာ မိမိကိုယ်ကို ရောင်းစားခြင်းအားဖြင့် အနိုင်မရနိုင်ဘူးဆိုတာကို သိခဲ့ပါပြီ။ ကျွန်မရဲ့ စွန့်လွှတ် ပူဇော်ခြင်းဟာ အချည်းနှီးလုံးဝမဖြစ်ဘူးဆိုတာကို သေချာစေမည့်သူဟာ ကျွန်မမှာရှိနေပါပြီ။ ကျွန်မဟာ ဘယ်သူလဲ ဆိုတာကို သိတဲ့သူဟာ ကျွန်မမှာရှိနေပါပြီ။ ကျွန်မကို သူကပိုင်ပါတယ်။
ဘုရားသခင်ဆီမှ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို သင်ယူပါ။ လမ်းတွေပေါ်မှာ၊ ကားနောက်ခန်းတွေထဲမှာ အချစ်ကို မသင် ယူပါနှင့်။ ထိုနေရာတွေမှ သင် သင်ယူရရှိမည့် အချစ်ဟာ အဆိပ်တွေသာဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ သင့်ရဲ့ သန့်ရှင်းတဲ့အရာတွေဟာ အဆိပ်မိသွားနိုင်ပါတယ်။
ချစ်ခြင်းမေတ္တာ ဖြစ်တော်မူတဲ့ သူဆီမှ စစ်မှန်တဲ့မေတ္တာကို သင်ယူပါ။ သင် အစဉ်အမြဲ မျှော်လင့်နေတဲ့ အရာ အားလုံးရဲ့ အခြေခံအုတ်မြစ်ဟာ ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို သိရှိနိုင်ဖို့ သင်ဟာ ဤအခြေခံအမှန် တရားကို ငုံမိရမည်။ ““ဘုရားသခင်သည် ချစ်ချင်းမေတ္တာဖြစ်တော်မူ၏”” ဤအမှန်တရားကို သိပြီး အမျိုးသမီးဘဝ၏လှပမှုကို ဤအမှန်တရား နှင့် အတူ ရယူနိုင်ပါစေ။
၁။ သာယာပျော်ရွှင်အောင်မြင်သော အိမ်ထောင်တစ်ခု၌ မေတ္တာအမျိုးအစား(၃)ခုရှိရမည်။ ဤချစ်ချင်း မေတ္တာ အမျိုး အစား (၃)ခုကို ပိရမစ်ပုံအားဖြင့် ဖော်ပြနိုင်သည်။
၂။ အဂ္ဂါပေမေတ္တာဆိုသည်မှာ အခြားသူ၏အထွတ်အထိပ်ကောင်းကျိုးအတွက် မိမိကိုယ်ကို စွန့်လွှတ် ပူဇော်သော မေတ္တာမျိုးဖြစ်သည်။
၃။ အဂ္ဂါပေမေတ္တာဆိုသည်မှာ အခြားသူအပေါ်တွင်ခံစားရသော ပြင်းပြသောစိတ်ဆန္ဒကို ဆိုလိုသည်။
၄။ ကျွနု်ပ်တို့ကဲ့သို့ အပြစ်ရှိသောလူသားများအတွက် သားတော်ကိုစွန့်လွှတ် ပူဇော်ခြင်းအားဖြင့် ဘုရားသခင်က သူ၏ အဂ္ဂါပေမေတ္တာကိုပြသခဲ့သည်။
၅။ သင်သည် သင်၏မိသားစုဝင်အား တကိုယ်ကောင်းဆန်ခြင်းကင်းမဲ့စွာ ချစ်ခြင်းအားဖြင့် အဂ္ဂါပေ မေတ္တာကို အိမ်၌ပင် သင်ယူနိုင်သည်။
၆။ အိမ်ထောင်ရေးတစ်ခု၌ ၅၂၈ မေတ္တာကို လုံးဝမလိုအပ်ပါ။
၇။ သင်သည် တစ်စုံတစ်ဦးအား စစ်မှန်စွာချစ်သောအခါ၊ သူလက်ရှိဖြစ်နေသော ဘဝ၌ပင် သူ့ကိုလက်ခံ၍ လေးစား ရိုသေ ချစ်ခင်မည်ဖြစ်သည်။
၈။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမေတ္တာဆိုသည်မှာ ယောက်ျားနှင့် ဇနီးအကြားတွင် ရှိသော ထူးခြားကောင်းမွန်သည့် မေတ္တာဖြစ်ပြီး သင်၏ခင်ပွန်းအတွက်သာ ဤအရာကို ထိန်းသိမ်းထားသင့်သည်။
၉။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ပိရပစ်တွင်ခိုင်မာသည့် အုတ်မြစ်ကို လိုအပ်ပြီး ထိုအုတ်ဖြစ်မှာ ဘုရားသခင်၏ မေတ္တာတော်ပင်ဖြစ်သည်။
၁၀။ သင့်ကို အမှန်တကယ်ချစ်သောသူသည် သင်၏ကိုယ်ခန္ဓာကို အရင်ဆုံးတောင်းဆိုလိမ့်မည်။ မဟုတ်ပါ။ သူသည် သူ့အားလက်ထပ်ရန်သင့်ကိုစောင့်စား၍ တောင်းဆိုလိမ့်မည်။
သင်ခန်းစာ (၁) ချစ်ခြင်းမေတ္တာဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။
ကျွန်မဟာအထက်တန်းကျောင်းသူဘဝမှာ ယောက်ျားများစွာနဲ့တွဲခဲ့ပြီး များစွာနာကျင်ခဲ့ရပါတယ်။ ကျွန်မဟာ အလွန်ပင် ထိခိုက်လွယ်တဲ့မိန်းကလေးတစ်ဦးပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ တစုံတဦးအား ကျွန်မကို ချစ်စေလိုတယ်လေ။ တစုံတဦးအား ကျွန်မကို အမှန်တကယ်ဂရုစိုက်စေလိုခဲ့တယ်။ ပြသနာကတော့ ချစ်ဖို့ အတွက်မှန်ကန်တဲ့လူကို ရှာဖွေ တွေ့ရှိဖို့နှင့် ကျွန်မရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌ သူကိုဝမ်းမြောက်စေလိုခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်မ ကောလိပ်တက်တော့ ကျွန်မမှာ လက်ထပ်ဖို့နဲ့ချစ်ကြိုက်ဖို့ရည်ရွယ်ချက် မရှိခဲ့ဘူး။ ထိုအချိန်က ကျွန်မ ဤသို့ တွေးခဲ့သည်။ အရမ်းပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းတဲ့အချိန်တွေ ငါ့မှာရှိလာမယ်။ အတွေ့အကြုံတွေလည်း အများကြီးရပြီး တစုံ တဦး (သို့) တစုံတခုရဲ့ချည်နှောင်ထားခြင်းကို လုံးဝမခံဘူး။ တခြားစကားနှင့် ပြောရရင်၊ တာဝန်ကင်းမဲ့စွာနဲ့ အသက်ရှင်မယ်။ ““ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းပြီး သင့်တင့်တဲ့ပေါင်းသင်း ဆက်ဆံမှု့များကိုပဲ ရယူပြီး ကောလိပ်ကျောင်းသူ ဘဝဟာ ဘယ်လိုလဲ ဆိုတာကို သိအောင်လုပ်ရမယ်။””
ဂျိုးကို မတွေ့ခင်အထိ ကျွန်မဟာအခြေအနေ ကောင်းခဲ့ပါတယ်။ ““မြင်မြင်ချင်းချစ်မိသည်”” ဆိုသည့် အရာမျိုး ရှိသည် ဟု ကျွန်မယုံကြည်ခဲ့သော်လည်း၊ ထိုအချိန်က ကျွန်မသည် အချစ်စိတ်မွှန်နေသော ဆယ်ကျော်သက်တဦး ဖြစ်သောကြောင့် ဂျိုးကိုစတွေ့သောအခါ၊ သူသည်အလွန်ပင်““မိုက်””သည်ဟု ထင်ခဲ့သည်။ သူ့ တွင်ထက်မြက်သော ကိုယ်ရည် ကိုယ်သွေးမျိုး ရှိပြီး နှစ်လိုဖွယ် အလွန်ကောင်းသည်။
သူနှင့်ပထမဆုံးချိန်းတွေ့သောနေ့တွင် ကျွန်မတို့စကားအကြီးအကျယ်ပြောကြပြီး တဦးကိုတဦး အထင်ကြီးစေရန် အပြန်အလှန်ကြိုးပမ်းကြသည်။ တလကြာပြီးနောက် သူနှင့်ထပ်မံတွေ့ဆုံရန် သူကချိန်း ချက်သည်။ ကျွန်မဟာသူ့ကို ဒိတ်လုပ်ချင်တယ်ဆိုတာကို သူသိခဲ့မယ်လို့ ကျွန်မထင်တယ်။ သူကဒီအချက် ကို ဆုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီး အရာရာဟာ လေးလံလာခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်မတို့ရဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှု့ဟာ မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာ မစတင်ခဲ့ပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျွန်မတို့ဟာ တယောက်ကိုတယောက် အထင်ကြီးစေဖို့ ကြိုးပမ်းနေကြခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မဟာ ကျွန်မက လွဲပြီး ဘယ်သူနှင့်မှ သူ့ကို မတွဲစေချင်ဘူး။ အဲ့ဒီအချိန်က ကျွန်မဟာ ကျွန်မရဲ့အဆင့်အတန်းနဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရား စံနှုန်းတွေ ကို လျစ်လျူရှုခဲ့တယ်လို မထင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မဟာ သူ့ကို ကျွန်မအားအထင်ကြီးစေဖို့နဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှု တခု ကို စတင်တည်ဆောက်နိုင်ဖို့ လုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အရာတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်မတို့ဟာ ချိန်းတွေ့ခဲ့ကြပြီး အလေးအနက်စကားပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ ဆိုးဆိုးဝါးဝါးရန်ဖြစ်တာမျိုးလည်း ရှိခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ ကျွန်မကို ရန်ရှာပြီး အလွန်အမင်း ကျီစယ်ခဲ့ပါတယ်။ သူက အဲ့ဒီလိုလုပ်တဲ့အခါ၊ ကျွန်မဟာ ကျွန်မရဲ့ ခံစားချက် တွေကို ဖုံးကွယ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြီး ဟာသအနေနဲ့ ခံယူကာ ရယ်မောဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့် ကျွန်မဟာ အမှန်တကယ် နာကျင် ခဲ့ရပါတယ်။ ပါတီပွဲတွေမှာ သူဟာ ကျွန်မကို တဦးတည်းချန် ထားပြီ ထွက်သွားလေ့ရှိခဲ့တယ်။ သူဟာကျွန်မကို အထူးတလည် ဂရုစိုက်တာမျိုး မရှိခဲ့ဘဲ အဲ့ဒါက ကျွန်မကို နာကျင်စေခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီး ကျွန်မတို့ရဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှုဟာ တဖက်သတ် ဆက်ဆံမှု့မျိုးဖြစ်တာကို နားလည်လာခဲ့ပြီး ကျွန်မ သူ့အပေါ်မှာ ခံစားရသလိုမျိုး ကျွန်မအပေါ်ခံစားလာနိုင်စေဖို့ ကျွန်မဟာပြင်းပြင်း ထန်ထန်စတင်ကြိုးပမ်းခဲ့တယ်။ ဤသို့လုပ်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်မဟာ မိမိကိုယ်ကို ဒုက္ခတွေ့စေခဲ့တယ်။ ကျွန်မဟာ ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြိုးပမ်းခဲ့ပြီး သူ့ကို ပျော်ရွှင်ကြည်နူးစေမည့်အရာ တနည်းအားဖြင့် သူလိုချင်တဲ့အရာ မည်သည့်အရာကိုမဆို စတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စများ အပါအဝင်ပေါ့။ ကျွန်မက ဤသို့တွေးခဲ့တယ်။ ““ငါသာမလုပ်ပေးရင်၊ သူဟာ အဝေးကို ထွက် သွား လိမ့်မယ်။ ငါသူ့ကို အဆုံးရှုံးမခံနိုင်ဘူး။””
အချိန်တွေကုန်ဆုံးခဲ့ပြီး ကျွန်မတို့ဟာ အိပ်ရာထဲ အတူဝင်ကြပြီး မမှန်ဘူးဆိုတာ ကျွန်မသိတဲ့အရာတွေကို ပြုလုပ် ခဲ့ကြတယ်။ ကျွန်မဟာ သူ့ကို ကျွန်မအနားမှာ ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ဖို့အတွက် ကျွန်မရဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရား စံနှုန်း တွေကို စွန့်လွှတ်ခဲ့တယ်။ မိန်းမပျိုလေးတဦးလုပ်နိုင်တဲ့ အကြီးအမားဆုံးသောအမှားဟာ ဒီအမှားပါပဲ။ သူမဟာ ယောကျ်ား တဦး လုပ်စေလိုတဲ့အရာတွေကို ဆက်ပြီးပြုလုပ်နေမည် ဆိုပါက၊ သူဟာ သူမအပေါ်အရူးအမူးဖြစ်လာမည်ဟု ထင်လေ့ ရှိသည်။ သို့သော် ဤအရာသည် မမှန်ကန်ပါ။
ဂျိုးဟာ ကျွန်မအပေါ် ရိုသေလေးစားမှု့မရှိတော့တာကို ကျွန်မသိခဲ့ပြီး ကျွန်မအပေါ်ကျွန်မရိုသေ လေးစားမှု့များစွာ ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာဟာ ဆိုးရွားတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မရဲ့ခရစ်ယာန်မိသားစုနောက်ခံကြောင့်ကျွန်မဟာ ကျွန်မရဲ့ အပြစ် တွေမှာ အကြိမ်တရာမက သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ သို့သော်ဘုရားသခင်အား ““ခွင့်လွှတ်ပါအရှင်””ဟု မပြောနိုင်ခဲ့ပါ။ အကြောင်း မှာ ထိုအရာတွေကိုဆက်လုပ်နေမိမှာကို ကျွန်မသိတဲ့ အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ကိုထိန်းသိမ်းထားနိုင်ဖို့အတွက် ဘာကိုမဆို ကျွန်မ လုပ်လိုခဲ့တယ်။
ဤနေရာ၌ ကျွန်မ မိန်းမပျိုလေးတွေကို ပြောလိုသည်မှာ တဦးဦးနှင့်ဒိတ်လုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးပါက သူဟာ ခရစ်ယာန် ဖြစ်သည်ဟု သင်သိထားသောလူကိုရှာပါ။ ““ကျွန်တော်ဟာ ခရစ်ယာန်တဦးဖြစ်ပြီး ကျွန်တော့်မှာ ကိုယ်ကျင့်တရားစံနှုန်း တွေ့ရှိတယ်””ဟု ရဲဝံ့စွာပြောနိုင်သော လူစားမျိုးဖြစ်သင့်သည်။ ရိုင်းစိုင်းသော လူစားမျိုးတွင်ပါဝင်ပြီး ခရစ်ယာန် မဟုတ်သောသူများကို ဒိတ်လုပ်ခြင်းသည် အရဲစွန့် ရဲဝံ့စွာလုပ် ဆောင်သော ကိစ္စမျိုးဖြစ်သည်။ သို့သော်ထိုသို့သော ယောက်ျားမျိုးနှင့်ဝေးရာတွင်နေပါ။ အကြောင်းမှာ သင့်ထံမှ အဖိုးထိုက်သောအရာတခုခုသည် သူတို့နှင့်ဆက်ဆံနေတုံး ဆုံးရှုံး သွား နိုင်တယ်။
ဂျိုးနှင့်ကျွန်မဟာ ချိန်းတွေ့နေစဉ်ကာလအတွင်း ပြဿနာများစွာတက်ခဲ့တယ်။ ကျွန်မတို့ဟာ မကြာခဏ ရန်ဖြစ် ခဲ့ ကြတယ်။ သူဟာကျွန်မကို တမင်တကာရန်ရှာခဲ့ပြီး ကျွန်မဟာအမြဲတစေ နာကျင်ခဲ့ရတယ်။ သူနှင့်အတူ အိပ်တဲ့ အတွက် ကျွန်မမှာအပြစ်ရှိတယ်လို့ ခံစားရတာကို သူ့ကိုရှင်းပြဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပြီး ရပ်တန့်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့် သူက လက်မခံ ခဲ့ဘူး။
ကျွန်မဟာ ကျွန်မတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကို ဝေဖန်သုံးသပ်ကြည့်ခဲ့ပါတယ်။ ခပ်ပြတ်ပြတ် ပြောရရင်တော့ ကျွန်မတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ ဆက်ဆံရေးဟာ ““ပုပ်စပ်””ခဲ့တယ်။ သူဟာကျွန်မကို ကောင်းကောင်း မဆက်ဆံ ခဲ့ပါဘူး။ သို့သော် ကျွန်မရဲ့ အခြားစိတ်တစ်စိတ်က ဤသို့တွေးခဲ့တယ်။ ““အကယ်၍၊ ငါတို့သာ လက်ထပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် အရာရာဟာ ပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါတယ်။ သူဟာငါ့ကို ချစ်လာပြီး စောင့်ရှောက်လိမ့်မည်။”” ဤသို့တွေးခြင်းသည် ကျွန်မ အတွက် အကြီးအကျယ်မှားခဲ့သည်။ သင်ဟာသင့်ကို ချစ်စေဖို့အတွက် လူတဦးကို ပြောင်းလဲလာအောင် မလုပ်နိုင်ပါဘူး။ သင်ဟာ မည်မျှ ကြိုးစားသည်ဖြစ်စေ၊ မည်မျှ သူတို့အားချစ်သည်ဖြစ်စေ၊ သူတို့ဟာ သင့်ကိုချစ်စေဖို့အတွက် သူတို့အား ပြောင်းလဲ လာအောင် မလုပ်နိုင်ပါ။
သင်သည် ရည်းစားဘဝကာလအတွင်း၌ သင်တို့၏ဆက်ဆံမှု့ကို ဆယ်ကြိမ်မက၊ အကြိမ် ၂၀ မီးမောင်း ထိုးကြည့် နိုင်သည်။ သင်တို့၏အိမ်ထောင်ရေးဘဝမှာလည်း ရည်းစားဘဝကာလအတွင်း၌ ဆက်ဆံမှု့ကဲ့သို့ပင် ဖြစ်လိမ့်မည်။ တီဗွီ၊ စာအုပ်များ၊ ရုပ်ရှင်များနှင့် သီချင်းများက သင်သည်မျက်စိ တမှိတ်အတွင်း၌ပင် အရာအားလုံးတို့ကို ပြီးပြည့်စုံ သွားအောင် မှော်ဆန်ဆန်လုပ်နိုင်သည်ဟု ထင်စေလေ့ ရှိသည်။ တဦးကိုတဦးချစ်ပြီး မိမိတို့၏အိမ်ထောင်ရေး တည်မြဲအောင် လုပ်နေသူတို့အတွက်ပင်လျှင် အိမ်ထောင်ရေးဘဝသည် ခက်ခဲသည်။
ကျွန်မသည် ကျွန်မနှင့်ဂျိုးတို့၏ရည်းစားဘဝကို ဆယ်ကြိမ်(သို့) ငါးကြိမ်ခန့် မီးမောင်းထိုးကြည့် ပါက အနာဂတ် တွင် ဂျိုးကကျွန်မအားစွန့်ခွာသွားမည်ကို ကျွန်မသိကောင်းသိခဲ့လိမ့်မည်။ သူသည် အနာဂတ်တွင် အခြား မိန်းမများနှင့် တွဲခုတ် လိမ့်မည်။ ကျွန်မအပေါ်တွင် ဒေါသအိုးပေါက်ကွဲလိမ့်မည်။ ကျွန်မကိုရိုက်နှက်လိမ့်မည်။ သူက ကျွန်မအား မိမိမယားကဲ့သို့ ဆက်ဆံလိမ့်မည်မဟုတ်ဘဲ ယောကျ်ားတဦး၏တာဝန်များကိုလည်း သူ ယူလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ဒါတွေ အားလုံးကို ကျွန်မ သိခဲ့ကောင်းသည်။
သို့သော် ကျွန်မသည် သူနှင့်လမ်းမခွဲခဲ့ပါ။ ကျွန်မအချိန်မဆွဲတော့ဘဲ သူနှင့်ခိုးပြေးကာလက်ထပ် လိုက်သည်။ သူနှင်ခိုးပြေးပြီး လက်ထပ်ခဲ့ခြင်းအတွက် ကျွန်မသည် မိမိကိုယ်မှလွဲ၍ မည်သူ့ကိုမျှအပြစ် မတင်ခဲ့ပါ။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ ဤသို့မလုပ်သင့်ကြောင်းကို ကျွန်မသိခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ သို့သော် အဲ့ဒီအချိန်ကာလကလေး၌ ကျွန်မဟာ ရှည်ရှည်ဝေးဝေး တွေးတောမနေတော့ဘဲ ဆုံးဖြတ်ချက်တခုကို အလျင်အမြန်ချခဲ့သည်။ ကျွန်မဟာသူနှင့်လက်မထပ်ပါက သူ့ကိုဆုံးရှုံးရတော့မည်ဟု ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ သို့သော် ကျွန်မဆုံးဖြတ်သင့်ခဲ့သည့်အရာမှာ သူဟာ ကျွန်မ အဆင်သင့် ဖြစ်သည့်အချိန်ကို မစောင့်ပါက၊ သူနှင့်လက်ထပ်ရန် ကျွန်မအတွက် မထိုက်တန်ပါဟု ဆုံးဖြတ်ခဲ့သင့်သည်။ သို့သော် ကျွန်မ၏စိတ်ခံစားမှု့ များသည် လုံးဝဥဿုန်ထိန်းချုပ်ထားခြင်းကို ခံရပြီး ကျွန်မ၏တွေးခေါ်မှု့ပုံစံမှာလည်း ရှင်းရှင်း လင်းလင်း မရှိခဲ့ပါ။ ကျွန်မဟာအလွန်ပင် စိတ်ရှုပ်ထွေးနေခဲ့ပြီး မနာကျင်လိုခဲ့ပါ။
ဤအိမ်ထောင်ရေးဘဝဟာ ကျွန်မဘဝမှာ နာကျင်ဖွယ်အကောင်းဆုံးအရာဖြစ်လာမည်ကို မသိရှိ ခဲ့ဘဲလျက်၊ ကျွန်မဟာ အိမ်ထောင်ရေးဘဝအတွင်းသို့ ခုန်ဝင်ခဲ့သည်။
ကျွန်မတို့ဟာ ကျွန်မတို့ရဲ့မိဘတွေကို ဒီအကြောင်းအားပြောပြသည့်အခါ၊ သူတို့ဟာ အလွန်နာကျင်ပြီး၊ စိတ်ပျက် ကြ ပါတယ်။ ဂျိုးကောလိပ်တက်နိုင်ဖို့အတွက် ကျွန်မဟာ ကျောင်းထွက်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မဟာ ရနိုင်တဲ့ အလုပ် မှန်သမျှကို လုပ်ခဲ့တယ်။ ကျွန်မဟာ စားပွဲထိုးအဖြစ်လုပ်ခဲ့ပြီး ညဘက်မှာယမကာဆိုင်မှာ လည်းလုပ်ခဲ့တယ်။ အဲဒီ အလုပ်က တော်တော် ဆိုးပါတယ်။ အရောင်းဝန်ထမ်းအဖြစ်လည်း လုပ်ခဲ့တယ်။ ကျွန်မတို့နှစ်ဦး ရှေ့ဆက်နိုင်ဖို့အတွက် ကျွန်မဟာ ဘာကိုမဆို လုပ်ခဲ့တယ်။
ကျွန်မတို့ရဲ့ အိမ်ထောင်ရေးဘဝဟာ ဘာမှမဟုတ်ပါဘူး။ သူကကျွန်မကိုမချစ်ပါဘူး။ တကယ်တမ်းကျတော့ ကျွန်မ ကသာ သူ့ကိုချစ်နေပြီး သူကကျွန်မကိုချစ်လာဖို့အတွက် ကြိုးစားနေခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ သူကို ကျေနပ်နှစ်သက် စေဖို့ အတွက် ကျွန်မရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခံစားချက်တွေကို စွန့်လွှတ်ပူဇော်ခဲ့တာတောင် မှ ဘာမှ မထူးခြားလာခဲ့ပါဘူး။ မထူးခြား နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ သင်ဟာတဦးဦးအား သင့်ကိုချစ်လာအောင် မလုပ်နိုင်ပါဘူး။ သူတို့က သင့်ကိုချစ်ရင်ချစ်မယ်။ မချစ်ရင် မချစ်ဘူး။ သူဟာကျွန်မကိုစွန့်ခွာပြီး အသစ် တစ်ယောက်ရှာသွားမှာကို ကျွန်မဟာအဆက်မပြတ် ထိတ်လန့် နေခဲ့ရပါ တယ်။ သူကလည်း အဲ့ဒါကိုပဲ သေချာလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မဟာ အဲ့ဒီအချက်ကို လက်မခံချင်ခဲ့ဘူး။ အကြောင်းမှာ ကျွန်မဟာ ကျွန်မတို့ရဲ့ အိမ်ထောင်ရေးကို အလုပ်လုပ်စေချင်လို့ပဲဖြစ်တယ်။
ကျွန်မတို့လက်ထပ်ပြီးနောက် ၅လအကြာမှာ ကျွန်မဟာ ကိုယ်ဝန်ရှိလာပြီး ချစ်စရာကောင်းတဲ့ သမီးလေးတဦးကို မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ ဒီကစ္စကအခြေအနေတို့ကို ခဏတဖြုတ်အပြောင်းအလဲ ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ သူဟာခလေးငယ်ကို ရရှိခဲ့ခြင်း အတွက် အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့တယ်။ သို့သော်ကလေးရပြီးတလ အကြာမှာတော့ အရာရာဟာ အရင်အတိုင်း ပြန်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ သူဟာအရင်အတိုင်း ဒေါသအိုးပေါက်ကွဲ နေလေ့ရှိပြီး သမီးလေးကိုကျွန်မနဲ့ပဲ တချိန်လုံး ချန်ထားပြီး ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး ကျွန်မချည်းပဲ ထမ်းစေခဲ့သည်။ ကလေးငယ်ကို ပြုစုပျိုးထောင်ဖို့နဲ့ မိသားစုကိုထောက်ပံ့ဖို့တာဝန်ကို ကျွန်မ ကပဲ ယူခဲ့ရတယ်။
သူဟာကျွန်မကို မချစ်ကြောင်း၊ ဘယ်တော့မှလည်းချစ်လာမည်မဟုတ်ကြောင်း၊ သူဟာအဖေကောင်း တဦး လည်း မဟုတ်ကြောင်းနှင့် တာဝန်သိတတ်တဲ့ခင်ပွန်းလည်းမဟုတ်ကြောင်းကို သူနှင့်လက်ထပ် ပြီးသုံးနှစ်အကြာမှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အရာတွေကို ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်မနားလည်လာခဲ့တယ်။ ကျွန်မဟာ နောက်ထပ် တောင့်မခံ နိုင်တော့ဘဲ သူနှင့် ကွာရှင်း ခဲ့တယ်။
ကျွန်မဟာ ကျွန်မဘဝကို ပြန်လည်သုံးသပ်တဲ့အခါ၊ ဘယ်နေရာမှာ ကျွန်မအမှားတွေလုပ်ခဲ့သလဲ ဆိုတာကို သိမြင် ခဲ့တယ်။ ကျွန်မရဲ့ပထမဆုံးအမှားကတော့ ကျွန်မဟာဘုရားသခင်နှင့် ပုံမှန်မိတ်သဟာယ ကိုလက်မခံခဲ့၊ မထိန်းသိမ်း ခဲ့ခြင်း ပဲ ဖြစ်တယ်။ ကျွန်မဟာ အဲ့ဒါကိုလုပ်ခဲ့ပါက၊ ဒီလိုအခြေအနေအတွင်းသို့ ကျရောက်ခဲ့မှာမဟုတ်ဘူး။ ဘုရားသခင်ရဲ့ မေတ္တာတော်ဟာ အခမဲ့ဖြစ်ပြီး သူရဲ့မေတ္တာဟာပြီးပြည့်စုံတာကြောင့် သူ့လိုမေတ္တာမျိုးကို သင့်ဘဝတလျှောက်လုံးမှာ မည်သူ ဆီကမှ သင်တွေ့ကြုံခံစားနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘုရားသခင်က သင့်ကိုပေးနိုင်သောချစ်ခြင်းမေတ္တာမျိုးမှာ ချွတ်ယွင်းချက် လုံးဝမရှိပါဘူး။ ချစ်ခြင်း မေတ္တာမရှိဘဲနဲ့ သင်အသက်ရှင်နိုင်တယ်လို့ သင်ဘယ်တော့မှမယုံကြည်ပါနဲ့။ အကြောင်းကတော့ သင်ဟာ အသက်မရှင်နိုင်ပါဘူး။ ထိုသို့သောမေတ္တာမျိုးကို ဘုရားသခင်မှလွဲ၍ သင့်ဘေးနားရှိ မည်သူ့ထံကမှ ရနိုင်ဖို့မမျှော်လင့်နိုင်ပါဘူး။ သူဟာ ထိုနေရာတွင်ရှိပြီး ဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲပါ။
အခြားအမှားတစ်ခုကတော့ အလျင်စလိုအစပြုခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ ယနေ့မှာ ဤအရာကိုလူအတော် များများက လုပ်လို ကြတယ်။ သင်က ““ဟုတ်ပြီ။ သူကငါ့ကိုကြိုက်တယ်။ ငါကလည်းသူ့ကို ကြိုက်တယ်။ ဒါကြောင့် ငါတို့ဟာ တဦးကို တဦး ချစ်နေကြတာပဲ။ ငါတို့တစ်ဆင့်တိုးပြီး ငါတို့နှစ်ဦးအတွက် လိင်ကိစ္စ ဟာဘယ်လို အလုပ်လုပ်မလဲဆိုတာ ကြည့်ကြတာ ပေါ့။””ဟု တွေးလိမ့်မည်။ ဤသို့တွေးခြင်းသည် သင်တို့၏သူငယ်ချင်းကောင်းဘဝကို ကျော်ပစ်လိုက်ခြင်း ပင် ဖြစ်သည်။ ကျွန်မနှင့်ဂျိုး၏ပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှု့၌ ပျောက်ဆုံးနေသောအရာမှာ ထိုအရာပင်ဖြစ်သည်။ သူနှင့် ကျွန်မကြား၌ ရိုသေ လေးစားမှု့ မရှိသလို သူငယ်ချင်းစိတ်ဓါတ်လည်း မရှိပါ။ သူကကျွန်မကို မလေးစားသလို ကျွန်မကလည်း သူ့ကို မလေးစားပါ။ သူငယ်ချင်းစိတ်ဓါတ်ဟာ ကျွန်မတို့နှစ်ဦးလုံး၌မရှိခဲ့ပါ။
နောက်ထပ်အမှားတစ်ခုကတော့ လုပ်စရာအကြောင်းမရှိဘဲ လိင်ကိစ္စကိုပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်မဟာ လက် မထပ် ရသေးပါ။ ကျွန်မဟာ လိင်ဆက်ဆံမှု့အတွက် ဖြစ်ပေါ်လာမည့်အကျိုးဆက်တွေကို ရင်ဆိုင်ဖို့ မရင့်ကျက် သေးသလို အသက်လည်းကြီးသင့်သလောက် မကြီးသေးပါ။ တစုံတဦးနှင့် လိင် ဆက်ဆံဖို့အတွက် သင့်မှာခန္ဓာပိုင်းအရ အဆင်သင့် ဖြစ်နေခြင်းက ဆက်ဆံဖို့အတွက် သင့်ဘက်မှလုံး၀ ဥဿုန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဟု ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။ လိင် ဆက်ဆံခြင်း သည် ခန္ဓာပိုင်းလုပ်ဆောင်မှု့တစ်ခုသာမဟုတ်ဘဲ သင်စိတ်ခံစားမှု့အားလုံးလည်း ဤကိစ္စ၌ ပါဝင်ပတ်သက်နေသည်။ သင်သည် အဆင်သင့် မဖြစ်သေးဘဲ ဤကိစ္စကိုလုပ်ပါက သင်ဟာသင်၏စိတ်ခံစားမှုအားလုံးကို ရှုပ်ထွေးသွားစေနိုင်သည်။ လိင် ကိစ္စဟာ အိမ်ထောင်သည်ဘဝအတွက်သာ သီးသန့်ဖယ်ထားသင့်တဲ့ အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှုတစ်ခု၏ အခြေခံအုတ်မြစ်ကိုကြည့်ပါက၊ သင်ဟာပထမဆုံး သူငယ်ချင်းဘ၀ အားဖြင့် စတင် သင့်ပြီး သင်တို့နှစ်ဦးလုံးက ခရစ်ယာန်ဖြစ်သည်ကို သင်သိမြင်လိမ့်မည်။ ယင်းသူငယ်ချင်းဘဝမှ ရိုသေလေးစားမှု့နှင့် ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည်။ ထို့နောက်ဘုရားသခင်က ထိုမေတ္တာကို ကြာရှည်စွာထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့ ကူညီ ပေးသည်။ အဲ့ဒီကနေပြီ သင်ဟာအလေးအနက် ထား၍ ချိန်းတွေ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှ လက်ထပ်နိုင်သည်။
ဤအမှန်အကန်အဖြစ်အပျက်ကို ရေးသားသူသည် အချစ်ကိုရှာနေခဲ့သည်။ တစုံတဦးကိုသင့်အား ချစ်စေလိုပြီး သင့်ကလည်းပြန်ချစ်လိုခြင်းသည် သဘာဝသာဖြစ်သည်။ လူငယ်လူရွယ်အတွက် ဤအချက် သည်ပို၍မှန်သည်။
သင်ဟာအထက်တန်း(သို့)ကောလိပ်တက်နေပါက ဖြစ်နိုင်ချေမှာ သင်ဟာ ယခုမှန်ကန်သော တစုံတဦးနှင့် ချစ်ကြိုက် နေသည် (သို့) ချစ်ကြိုက်နိုင်လိမ့်မည်ဟု သင်ထင်လိမ့်မည်။ သို့သော် အချစ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ မှားယွင်းစွာ တွေးခေါ်မှု့ များစွာ ရှိသည်။
လူများစွာသည် စစ်မှန်သောအချစ်နှင့်တပ်မက်စွဲလမ်းခြင်းကို ရှုပ်ထွေးကြသည်။ အခြားတို့က ““မြင်မြင်ချင်း အချစ်”” သည် စစ်မှန်သောအရာဖြစ်သည်ဟု ထင်ကြသည်။ အခြားသူတို့က အချစ်နှင့် ရမ္မက် အကြား (သို့) အချစ်နှင့် လိင်ပိုင်း ဆိုင်ရာ ဆွဲဆောင်မှု့များအကြားရှိ ကွဲပြားမှု့ကို မသိရှိကြပါ။
တပ်မက်စွဲလန်းခြင်းဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း? ထိုအရာကသင့်အပေါ်တွင် မည်သို့အကျိုးသက် ရောက်မှု့ ရှိ သနည်း? အချစ်နှင့်ရမ္မက်အကြားရှိ ကွာခြားမှု့မှာ အဘယ်နည်း? လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဆွဲဆောင်မှု့ ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း? စစ်မှန်သောအချစ်ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း? ဤအရေးကြီးသောမေးခွန်းများ ကိုစဉ်းစားကြပါစို့။
တပ်မက်စွဲလန်းခြင်းဆိုသည်မှာ တစုံတဦး၏ဆွဲဆောင်မှု့ကြောင့် စိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ်ဖြစ်သွားခြင်း ပင်ဖြစ်သည်။ အဘိဓါန်က ဤအရာကို ““အရူးအမူးချစ်ကြိုက်နေခြင်း””ဟု ပြောသည်။ တနည်းအားဖြင့် သင်ဟာ ထိုဆွဲဆောင်မှု့ကြောင့် စိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ်ဖြစ်သွားပြီး ကိုယ်ဘာလုပ်နေသည်ကိုပင် မသိတော့ခြင်း ဖြစ်သည်။ တပ်မက်စွဲလန်းခြင်းသည် စစ်မှန်သော အချစ် မဟုတ်ပါ။
ဤသို့သော တပ်မက်စွဲလန်းမှုမျိုးရှိနေသူတဦးသည် သူချစ်ကြိုက်နေသောသူမှလွဲ၍ အခြား မည်သည့်အရာ၊ မည်သူကိုမှ အများအားဖြင့် မမြင်တော့ပါ။ တပ်မက်စွဲလန်းခြင်းသည် စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် အတွေ့အကြုံတခုဖြစ်ကာ စိတ်ပိုင်းအရ မြင့်တက်နေခြင်းဖြစ်သော်လည်း ကြာကြာမခံပါ။ အကြောင်းမှာ စစ်မှန်သော အချစ်မဟုတ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။
အရူးအမူးစွဲလမ်းခြင်း၏ လက္ခဏာတစ်ခုမှာ သင်ချစ်ကြိုက်နေသည်ဟု သင်ထင်သောသူအား ဘုရားတစ်ဆူကဲ့သို့ ကိုးကွယ်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ သူပြောသမျှ၊ လုပ်သမျှအရာအားလုံးသည် သင့်အဖို့ ပြီးပြည့်စုံလှသည်ဟု ထင်ရသည်။ သင်သည် သူ၏အပြစ်အနာအဆာများကို မမြင်တော့ပါ။ အခြားလူများ က ထိုသူ၌ “အန္တရာယ်ရှိသောလက္ခဏာ” များစွာကို မြင်နိုင်သော်လည်း သင်မှာမူ မျက်မမြင်ဆန်ဆန် အရူးအမူးစွဲလမ်းနေသောကြောင့် ဘာကိုမှမမြင်တော့ပါ။ သင်၏ အချစ်စိတ်သည် သင့်ကိုလွှမ်းခြုံသွားသောကြောင့် သင်သည် သင်၏သာမန်အသိတရားကို အသုံးမပြုနိုင်တော့ပါ။ သင်သည် တစုံတဦးအား အရူးအမူးစွဲလမ်းနေပါက၊ သင်ဟာဖရိုဖရဲဖြစ်နေလေ့ရှိပြီး စိတ်နှင့်ကိုယ် မကပ်တော့ပါ။ သင်သည် တာဝန် သိစိတ်ကင်းမဲ့သွားပြီး မိမိ၏တာဝန်များကိုပင် လျစ်လျူရှုလေ့ရှိသည်။
တခါတရံလူငယ်များသည် သူတို့၏တာဝန်များကိုမလုပ်ပဲ လဲလျောင်းကာ စိတ်ကူးယဉ်ကြမည် ဖြစ်သည်။ တစုံတဦးက “ကယ်ရိုလိုင်း၊ နင်ဘာဖြစ်နေတာလဲ။ နင်စိတ်နဲ့ကိုယ်မကပ်သလိုပဲ” ဟုမေးသော အခါ ကယ်ရိုလိုင်းက ချိုသာစွာပြုံးလျက် “အိုး..ငါအချစ်ကိုတွေ့နေပြီ။” ဟုပြန်ဖြေလိမ့်မည်။ မဟုတ်ပါဘူး။ သူမဟာ အရူူးအမူး စွဲလမ်းနေခြင်း သာဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သူမသာ တစုံတဦးအား အမှန်တကယ် ချစ်ကြိုက်နေပြီး သူမ၏အချစ်ကသာ စစ်မှန်ပါက၊ သူမဟာ သူမရဲ့ အနာဂတ် အတွက် ပြင်ဆင် အစီအစဉ် ချနေမည်ဖြစ်ပြီး သူမ၏တာဝန်များကိုလည်း အလေးထား၍ လုပ်ဆောင်မည် ဖြစ်သည်။
အရူးအမူးစွဲလမ်းခြင်း အများစုသည် ကြာရှည်မခံပါ။ အရူးအမူးစွဲလမ်းချိန်ကာလအတွင်း၌ မှားယွင်းစွာ လုပ် ဆောင်မှုများ၏ ခါးသီးသောအသီးများကိုသာ သီးစေလေ့ရှိသည်။ သင်ဟာအရူးအမူးစွဲလမ်းနေပါက၊ သင်၏သာမန် အသိ တရား ကို သင်အသုံးမပြုတော့ပါဆိုသည့်အချက်ကို သတိရပါ။ သင်၏စိတ်ခံစားချက်များသည် ထိန်းချုပ်ထားခြင်းကို ခံနေ ရသည်။ သင်သာ ဤသို့ဖြစ်နေပါက၊ သင့်ဘဝတစ်လျှောက်လုံး၌ သင်နောင်တရမည့် ကိစ္စများကို သင်ပြုလုပ်မိ နိုင်သည်။
Debbie သည် Larry အား အရူးအမူးစွဲလမ်းနေခဲ့သည်။ သူသည် ချောမောပြီး ဘောလုံးကစားသမား တဦး ဖြစ်နေသည်ဆိုသည့်အချက်က သူမအား သာ၍စွဲလမ်းစေသည်။ တစ်နေ့တွင် သူမအိပ်မက်မက်နေသောအရာသည် လက်တွေ့ဖြစ်လာခဲ့သည်။ လယ်ရီက သူမနှင့်ဒိတ်လုပ်ရန် သူမအား ဖုန်းဆက်ခဲ့သည်။ သူမသည် အကြီးအကျယ် စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့သည်။
သူရောက်လာပြီးနောက် သူမက သူတို့ဘယ်ကိုသွားမလဲဟု မေးသောအခါ သူက မတိမကျ အဖြေ ကိုသာ ပြန်ပေးသည်။ သူတို့သည် လူသူကင်းမဲ့သောနေရာတစ်ခုသို့ မောင်းထွက်ခဲ့ပြီး ကားကိုပါကင်ထိုး လိုက်သည်။ သူက သူမအား မည်မျှချစ်ကြောင်းကိုပြောသည်။ အခြေအနေတို့သည် အထိန်းအချုပ်မဲ့မသွားစဉ်တွင် သူမသည် သူ့အား မတားဆီးခဲ့ပါ။ သူမက “ဒီအတွေ့အကြုံလေးက ငါ့ကိုထိခိုက်စေမှာမဟုတ်ပါ ဘူး။” ဟုတွေးခဲ့လေသည်။ ဤအတွေ့ အကြုံလေးက လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စအားလုံးပါဝင်သော အတွေ့အကြုံ ကြီးဖြစ်သွားခဲ့သည်။
နောက်ပိုင်းတွင် Debbie က ဤသို့ပြန်ပြောသည်။ ““ဒါဟာ အရမ်းကိုဆိုးရွားခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မဟာ အလွန်ကို ကြောက်ရွံ့နေခဲ့ပါတယ်။ တစ်ယောက်ယောက်ကများ ကျွန်မတို့ကိုမြင်သွားပါက၊ ဘာဖြစ်သွား မည်နည်း ၊ မိနစ် အနည်းငယ် အတွင်း ကျွန်မဟာ အဝတ်အစားပြန်ဝတ်လိုက်ပြီး ကျွန်မအပေါ်ဂရုမစိုက်တဲ့ ယောကျ်ား၊ ကျွန်မကလည်း ဂရုမစိုက်တဲ့ယောကျ်ားတစ်ယောက်အတွက် ကျွန်မရဲ့ အဖိုးထိုက်တဲ့အရာ တစ်ခုကိုစွန့်ပစ်မိခဲ့တဲ့အတွက် မိမိကိုယ်ကို မုန်းတီး ခဲ့ပါတယ်။
ရမ္မက်ဆိုသည်မှာ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအာသီသကို ဖြည့်ဆည်းလိုသောပြင်းပြသည့်စိတ်အလိုပင် ဖြစ်သည်။ ရမ္မက် အား အချစ်နှင့်မကြာခဏပူးတွဲဖော်ပြလေ့ရှိသော်လည်း ရမ္မက်နှင့်အချစ်သည် လုံး၀ ကွဲပြားသောအရာ နှစ်ခု ဖြစ်သည်။
ရမ္မက်သည် တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်သည်။ ရမ္မက်၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ တစုံတခုအား ရလိုခြင်းဖြစ်သည်။ ရမ္မက်သည် သူ့အား အလျင်အမြန်ကျေနပ်စေခြင်းကို လိုလားသည်။ ရမ္မက်က ““အဲဒါကို ငါ့ရဲ့ပျော် ရွှင်ကျေနပ်မှုအတွက် လိုချင်တယ်။ အကျိုးဆက်တွေက ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အဲ့ဒါကို ငါအခုလိုချင်တယ်။””
အချစ်သည် တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်ခြင်းကင်းမဲ့သည်။ အချစ်၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ ပေးဆပ်လိုခြင်းဖြစ်သည်။ အချစ်က စောင့်ဆိုင်းလိုသည်။ စစ်မှန်သောအချစ်သည် မှန်သောအချိန်နှင့် မှန်သောအခြေအနေတို့ကို စောင့်ဆိုင်း လိမ့် မည်။
ကျမ်းစာက ရမ္မက်နှင့်အချစ်နှစ်ခုစလုံးအကြောင်းကို ဥပမာပေး၍ ပြောပြထားသည်။ ဒါဝိဒ်၏ သားတစ်ဦးဖြစ်သူ အာမနုန်က သူသည်သူ၏ညီမဝမ်းကွဲ တာမာနှင့်အရူးအမူးချစ်ကျွမ်းဝင်နေသည် ဟုထင်ခဲ့သည်။ သူသည် သူမအား အလွန်တပ်မက်သဖြင့် နာဖျားပင်နာဖျားခဲ့သည်။ သူ၏မိတ်ဆွေဆိုးများထဲမှ တစ်ဦးက အာမနုန်အား သူ့ညီမတာမာနှင့် နှစ်ဦးတည်း ရှိနေနိုင်မည့် အစီအစဉ်တစ်ခုကို အကြံပေးတင်ပြ ခဲ့သည်။ အာမနုန်သည် ဤအစီအစဉ်ကို အကောင်အထည် ဖော်ခဲ့ပြီး သူ့ညီမ တာမာအား အလိုမတူ လိင် ဆက်ဆံခဲ့သည်။
နောက်ဘာဆက်ဖြစ်မည်နည်း။ သူသည် သူမအား ဂရုမစိုက်တော့ပါ။ အမှန်မှာ သူသည်သူမအား မုန်းတီးခဲ့သည်။ အာမနုန်၏အချစ်မှာ မစစ်မှန်ခဲ့ပါ။ ရမ္မက်သာဖြစ်သည်။
အခြားတစ်ဖက်၌ ကျမ်းစာက ရာခေလအပေါ်တွင်ထားသော ယာကုပ်၏မေတ္တာအကြောင်းကို ပြောပြထားသည်။ ယာကုပ်သည် ရာခေလအားရရှိရန်အတွက် ရာခေလ အဖေထံတွင်(၇)နှစ်ကြာ အလုပ် လုပ်ခဲ့သည်။ သူမအပေါ် တွင် ထားသော သူ၏မေတ္တာကြောင့် ကြာရှည်သော(၇)နှစ်တာကို ရက်အနည်းငယ် ကဲ့သို့ ယာကုပ်ကထင်သည် ဟု ကျမ်းစာက ရေးထားသည်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆွဲဆောင်မှုသည် ယောကျ်ားတစ်ဦးနှင့် မိန်းမပျိုတစ်ဦးကြားတွင် ရှိသောအရာ ဖြစ်သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက် လိင်ကို စိတ်ဝင်စားစေသော လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုအားဖြင့် ကျွနု်ပ် တို့ကို တည်ဆောက် ထားသည်။ ဤသို့ စိတ်ဝင်စားခြင်းသည် မမှားသလို အပြစ်မရှိပါ။ ဘုရားသခင်က ဤနည်းအတိုင်း ကျွနု်ပ်တို့ကို ဖန်ဆင်းထားသော ကြောင့်ဖြစ်သည်။ မှားသောနည်းလမ်းအားဖြင့် ကျွနု်ပ်တို့၏လိင်ပိုင်းအရ လှုံ့ဆော်မှုကို ကျေနပ် စေ သော အခါတွင်မူ အပြစ်ဖြစ်လာသည်။
တစုံတဦးအား လိင်ပိုင်းအရ စွဲမက်နေခြင်းက သင်သည် သူနှင့်ချစ်ကျွမ်းဝင်နေသည်ဟု မဆိုလိုပါ။ ပုရိသ ယောက်ျား တဦး က ကိုယ်လုံးကိုယ်လုံးပေါက်လှသော မိန်းမတဦးကိုမြင်ပြီး ““အားပါးပါး””ဟု ပြော လိမ့်မည်။ မိန်းမပျိုလေးတဦးက ရုပ်ဖြောင့်သောဘောလုံးသမားတဦးကို မြင်သောအခါ သူမ၏ရင်ခုန် သံများ စည်းချက်မှားသွားသည်။ အဲ့ဒါဟာ အချစ်လား? မဟုတ်ပါ။ ယောက်ျားနှင့် မိန်းမကြားထဲတွင် ရှိသော ခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာဆွဲဆောင်မှုသာ ဖြစ်သည်။
ရုပ်ရှင်များ၊ တီဗွီများ၊ မဂ္ဂဇင်းများနှင့် စာအုပ်များက ဤအတွေးအခေါ်မျိုးအားဖြင့် ကျွနု်ပ်တို့ကို တရစပ် ပစ်ခတ်သည်။ ““သင့်ကို စွဲမက်နှစ်သက်သောသူတဦးကို ရှာပါ။…လိင်ကောင်းကောင်းဆက်ဆံနိုင်သော ဘဝမျိုး ရလျှင် အရာအားလုံးဟာ ပြီးပြည့်စုံလိမ့်မည်။”” ကျောင်း၏အလှဘုရင်မသည် ဘောလုံးအသင်း၏ကပ္ပတိန်ဟောင်းကို လက်ထပ် လိုက်သောအခါ၊ လူတိုင်းကက သက်ပြင်းချ၍ ““လိုက်ဖက်လိုက်တဲ့ စုံတွဲ ပါလား”” ဟုမှတ်ချက်ချသည်။ သို့သော် ခဏကြာပြီးနောက်၊ သူူတို့၏အိမ်ထောင်ရေးသည် ပြိုကွဲသွားသည်။ ဘာကြောင့်နည်း။ အကြောင်းမှာ စစ်မှန်သော မေတ္တာသည် သူတို့နှစ်ဦး၌ မရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သူတို့သည် တဦးကိုတဦး လိင်ပိုင်းအရ စွဲမက်ကြသော်လည်း၊ အဲဒါက လွဲ၍ အကြိုက် တူသောအရာများ သူတို့ တွင်မရှိပါ။ မကြာမီ သူတို့သည် တဦးကိုတဦးငြီးငွေ့လာကြသည်။
လိင်ပိုင်းအရ ဆွဲဆောင်မှုသည် စစ်မှန်သောအချစ်မဟုတ်ပါ ဆိုသည့်အချက်ကို သတိရပါ။ လိင်ပိုင်း ဆိုင်ရာ အပြန်အလှန် စွဲမက်မှုသည် အိမ်ထောင်ရေး၌အရေးကြီးသော အခန်းကဏ္ဍတစ်ရပ်ဖြစ်သော်လည်း ဤစွဲမက်မှု တခု တည်း ၌သာ အိမ်ထောင်ရေးကိုမတည်ဆောက်နိုင်ပါ။ လက်မထပ်မီကာလအတွင်း လိင်ပိုင်း အရပါဝင်ပတ်သက်မှုကို မတား ဆီးနိုင်၊ မတားဆီးခဲ့မိသော စုံတွဲထောင်ပေါင်းများစွာရှိသော်လည်း ယခုတွင်မူ တဦးကိုတဦး ထိချင်းကိုပင်လျှင် မခံစားနိုင် တော့ပါ။
စစ်မှန်သောအချစ်တွင် အရည်အသွေးများစွာရှိသည်။ သာမန်အားဖြင့် အချစ်တွင် မှော်ဆန်သော ခန္ဓာပိုင်း အရ စွဲမက်မှုပါဝင်သော်လည်း၊ အဲဒီပါဝင်မှုထက်များစွာ အဓိပ္ပာယ်လေးနက်သည်။ အချစ်သည် သူငယ်ချင်းဘဝ၌ မြစ်ဖျား ခံသည်။ သင်ဟာ ထိုလူတကိုယ်လုံးကို စစ်မှန်သောအချစ်အားဖြင့်ချစ်နိုင်သည်။ သင်သည် ထိုလူနှင့်အတူ ရှိရခြင်း၌ ဝမ်းမြောက်ပြီး ထိုသူနှင့်ဝေမျှခံစားရခြင်း၌လည်း ဝမ်းမြောက်သည်။
ဤအချစ်သည် သူချစ်သောသူအတွက် ပေးဆပ်လိမ့်မည်။ အချစ်နှင့်အတူ အဓိကအရည်အသွေး တစ်ခုဖြစ်သည့် ဆပ်ကပ်အပ်နှံခြင်းလည်း ပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။ ပြဿနာများနှင့်ရင်ဆိုင်ရသောအခါ၊ ဤ အချစ်က အရှုံးမပေး၊ ဒူးမထောက် ပါ။ စစ်မှန်သောအချစ်က သင့်အတွင်းအကောင်းဆုံးအရာများကိုသာ ဖြစ်စေသည်။
သင်သည် သင်ချစ်သောသူက သင့်အတွက် ဂုဏ်ယူစေလိုသည်။ အကယ်၍ သင်သည် တစုံတဦး အား အရူးအမူး စွဲလမ်းပါက၊ သင်သည် ဟိုလှဲဒီလှဲလုပ်၍ စိတ်ကူးယဉ်နေမည်ဖြစ်သော်လည်း၊ သင်၏အချစ်သာ စစ်မှန်ပါက၊ သင်သည် အလုပ်ကိုကြိုးစားလုပ်၍ အစီအစဉ်များဆွဲကာ၊ အနာဂတ်အတွက် ပြင်ဆင် နေမည်ဖြစ်သည်။
စစ်မှန်သောအချစ်ဟူသည်မှာ သင့်ကိုရုတ်တရက်ရိုက်ခတ်လာသော စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ခံစားချက်မျိုး မဟုတ်ပါ။ ဤအချစ်သည် ကြီးထွားလာရန်နှင့် တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းလာရန်အတွက် အချိန်လိုအပ်သည်။ ကမ္ဘာဂီတ၏ လူကြိုက်များ သောသီချင်းအချို့က တစုံတဦးနှင့်မြင်မြင်ခြင်းချစ်မိခြင်းသည် စစ်မှန်သော အချစ်ဖြစ်သည်ဟု မှားယွင်းစွာ ထင်မြင်စေလေ့ ရှိသည်။
စစ်မှန်သောအချစ်သည် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ပို၍ကြီးထွားလာသည်။
သင်၏စစ်မှန်သောအချစ်သည် မကျဆင်းသွားပါ။ ဤအချစ်သည် သာ၍ကြီးထွားလာမည်ဖြစ်သည်။ သင်သည် လူတဦးအား စစ်မှန်သောအချစ်ဖြင့် ချစ်နိုင်ရန်အတွက် ထိုသူနှင့်အရင်ဆုံး သိကျွမ်းရမည်။ တစုံတဦးအား မြင်မြင်ခြင်း အမှန်တကယ် သိကျွမ်းရန်မဖြစ်နိုင်သကဲ့သို့ တစုံတဦးအပေါ်တွင် စစ်မှန်သော မေတ္တာကို မြင်မြင်ခြင်း ထားရှိနိုင်ဖို့ မဖြစ်နိုင် ပါ။ သင်သည် တစုံတဦးအားမြင်မြင်ခြင်းစွဲမက်သွားနိုင်ပြီး မြင်မြင်ခြင်းနှစ်ခြိုက်သွားနိုင်သည်။ သို့သော် သင်မသိ ကျွမ်း သော လူတဦးအား စစ်မှန်စွာချစ်နိုင်မည် မဟုတ်ပါ။
စာတန်က သင့်အားစစ်မှန်သောအချစ်ကို မသိစေလို၊ မတွေ့ကြုံမခံစားစေလိုပေ။ ထို့ကြောင့် သူသည် ချစ်ခြင်း မေတ္တာအတုများစွာကို ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်စေသည်။ သူသည် သင့်အား သင့်ဇနီးအပြင် အခြားသူများနှင့် လိင်ကိစ္စ၌ ပါဝင်ပတ်သက်စေလိုသည်။ သင့်ဘဝဟာ အသက်ရှင်ဖို့ တန်ဖိုးမရှိတော့ပါ ဟု သင်ထင်လာအောင် သင့်ဘဝအား သူက ရှုပ်ထွေးစေလိုသည်။
ဘုရားသခင်သည် သင့်အား တစ်ဖက်ကမ်းကုန် ချစ်ပြီး သင့်အတွက် အကောင်းဆုံးသောအရာများကိုသာ လိုလားသည်။ သူသည် သင့်အား အဖိုးထိုက်သောအချစ်ကို ရရှိစေလိုသည်။ ဈေးပေါသောလိင်ကိစ္စ မဟုတ်ပါ။ အကယ်၍သူသည် သင့်အား လက်ထပ်စေလိုပါက၊ သူ့တွင် သင့်အတွက် သင့်တော်သောသူ တစ်ဦးရှိသည်။ သင့်အား တကိုယ်ကောင်း မဆန်စွာ ချစ်ပြီး တစ်ဘဝလုံး သင့်အပေါ်တွင် ဆက်ကပ်အပ်နှံ ထားသောအဖော်တဦးအား သင်၌ ရှိစေလိုသည်။ ထိုနည်း တူ သင်ကလည်း ထိုသူအပေါ်သို့ တစ်ဘဝလုံး ဆက်ကပ်အပ်နှံစေလိုသည်။ ဘုရားသခင်သည် သင့်အိမ်အား ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ကောင်းကင်ဘုံလေးကဲ့သို့ ဖြစ်စေလိုသည်။
West piont ရှိ မစ္စစပီမြို့လေးတွင် ၂၅ နှစ်ကြာရှည်ခဲ့သော အိမ်ထောင်တစ်ခုသည် ကဗျာဆန်ဆန် လှပစွာ အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ ဒေသန္တရသတင်းစာအယ်ဒီတာ၏ သစ္စာရှိသောဇနီးဖြစ်သူသည် သူမ ဘုရာကျောင်း အပြင် ဘက်သို့ ထွက်လာခဲ့သည်။ သူမသည် ပြုံးရွှင်သောမျက်နှာဖြင့် မိတ်ဆွေများနှင့် စကားစမြည် ပြောပြီးနောက် အသင်းတော် ခြံဝင်း၏မြက်ခင်းပေါ်တွင် လဲကျဆုံးပါးခဲ့သည်။ သူမ၏အသက်ကို ကယ်တင်ရန် အရေးပေါ် အားထုတ်မှုများ မှာ အရာ မထင်ခဲ့ပါ။
သူမ၏ခင်ပွန်းနှင့် မိတ်ဆွေများအတွက်မူ၊ သူမသည် ဘုရားကျောင်းမှ လမ်းလျှောက်ထွက်၍ ကောင်းကင်ဘုံသို့ တိုက်ရိုက်တက်သွားသည်ဟု ထင်ရသည်။ မြို့ငယ်လေးသည် အံ့သြမိန်းမောသွားခဲ့သည်။ ကျန်ရစ်ခဲ့သောခင်ပွန်းဆီသို့ စာပေါင်းများစွာသည် ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ အကြောင်းမှာ သူမသည် နွေးထွေးစွာဖြင့် လေးစားခြင်းနှင့် ချစ်ခြင်းမြတ်နိုးခြင်း ကို ခံခဲ့ရသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဈာပနာအခမ်းအနားပြီးနောက်တစ်နေ့၌ သူမ၏ခင်ပွန်းဖြစ်သူ Henry Harris သည် သူ၏ဇနီးသည် ကိုရည်စူး၍ ခံစားချက်ပြင်းပြသော ဂုဏ်ပြုစာတစ်စောင်ကို ရေးခဲ့သည်။ Mr. Harris သည် ဤကဲ့သို့ သူ့ဇနီးသည်နှင့် ပတ်သက်၍ ရေးသားခဲ့သည်။ ““သူမဟာ ဘုရားကျောင်းထဲမှ တိုက်ရိုက်ကောင်းကင်ဘုံဆီ သို့ လမ်းလျှောက်ထွက်သွားခဲ့တယ်။”” မိတ်ဆွေတစ်ဦးပြောသလိုမျိုး သူမဟာ ဘုရားကျောင်းတက်ဖို့ West Point ကိုလာခဲ့ပြီး ဘုရားကျောင်းမှတစ်ဆင့် ထွက်ခွာသွားခဲ့တယ်။ သူမဟာ မစ္စစပီအမျိုးသမီးကောလိပ်မှ ဘွဲ့ရခဲ့ပြီး သင်းအုပ်ဆရာရဲ့လက်ထောက်လုပ်ဖို့ West Point သို့လာခဲ့တာကို ကျွန်တော်မှတ်မိပါတယ်။ အမှန်တကယ်တော့ West Point ရှိ သူမ၏အလုပ်ကို ယာယီအနေဖြင့်သာ သူမထင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ သခင်က သူမအား နိုင်ငံရပ်ခြားသာသနာပြုတစ်ဦးဖြစ်လာဖို့ ခေါ်နေခဲ့တယ်လို့ သူမဟာ ယုံကြည်နေခဲ့ပါတယ်။ သို့သော် သခင်က ကွဲပြားတဲ့ သတင်းစကားတစ်ခုကိုကျွန်တော့်အား ပေးခဲ့ပါတယ်။ သူမဟာ ကျွန်တော့်ရဲ့ ကောင်မလေးဆိုတာကို ကျွန်တော်သိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနှစ်အတွင်းမှာ သူမအား Mrs. Henry လုပ်ဖို့ ကျွန်တော် သူမကို စိတ်လှုပ်ရှားစွာ တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်တော်ရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုပြီး နောက်တစ်နှစ်အကြာမှာ ကျွန်တော်တို့ဟာ ပေါင်းဖက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဘုရားသခင်ရဲ့ အလိုတော်ဟာ ပြီးမြောက်ခဲ့တယ်ဆိုတာကို သံသယရှိစရာမလိုပါဘူး။ ဒီထက်ပိုပြီး ပျော်ရွှင် စရာကောင်းတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးမျိုးရှိတော့မယ် မထင်ပါဘူး။ ခေတ်ပေါ်စုံတွဲများက ဤအချက်ကိုယုံကြည်ရန် ခက်ခဲပေလိမ့်မည်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးဟာ ၂၅နှစ်အတွင်း တစ်ကြိမ်တစ်ခါမှ ရန်ဖြစ်စကား မများခဲ့ဖူးပါဘူး။ သဘောမတူညီမှုတွေတော့ ရှိကောင်းရှိခဲ့ပေမယ့် အဲဒီကြည်နူးဖွယ်နှစ်တွေကို ပြန်တွေး ကြည့်တဲ့အခါ၊ အကျိုးဆက်ဆိုးတွေရှိခဲ့တဲ့ အခြေအနေမျိုးတွေ မရှိခဲ့တာကို သတိပြုမိပါတယ်။
နောက်ထပ်ရောက်လာမည့် သီတင်းပတ်တွေနဲ့လတွေဟာ ကျွန်တော့်အတွက် အလွန်ခက်ခဲမယ်ဆိုတာကို ကျွန်တော် သိပါတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့မျက်ရည်တွေကို တိတ်တဆိတ်စီးကျနိုင်မည့် တိတ်ဆိတ်ငြိမ် သက်တဲ့ နေရာလေး တစ်ခုကို ရှာဖွေဖို့ လိုအပ်မည့် အချိန်တွေဟာရောက်လာပါလိမ့်မည်။ အဲဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မှားတာ ဘာမှမရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကောင်းကင်ဘုံဟာ ပိုပြီးမြတ်နိုးဖို့ကောင်းပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ Wanda ဟာ အဲဒီမှာရှိနေလို့ပါပဲ။ ပြီးတော့ သူမရဲ့တစိတ်တပိုင်းကို ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကလေး ၄ယောက်မှာ တွေ့နိုင်ပါသေးတယ်။ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းမှာ ကျွန်တော်ဟာ သူမအား ရိုးတံရှည်နှင်းဆီ ပန်းစည်းကိုလက်ဆောင်ပေးပါတယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေးတဲ့ပန်းစည်းမှာ နှင်းဆီပွင့် ၂၅ခု ပါပါတယ်။ အင်္ဂါနေ့မှာတော့ ကျွန်တော်ဟာ ပန်းပြင်တဲ့သူအား ကျွန်တော့်မိန်းမရဲ့အခေါင်းကို နှင်းဆီပွင့် တွေနဲ့ ဖြည့်ပေးဖို့ တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ပြန်ဆုံတွေ့ချိန်အထိ ထိုနှင်းဆီပန်းတွေဟာ ကြာရှည်ခံဖို့ လိုပါ လိမ့်မည်။
ကျွန်တော်ဟာ ဒီ၂၅နှစ်အတွင်းမှာ သူမကိုချစ်ပါတယ်လို့ မပြောပဲ နေ့တစ်နေ့ကိုမကုန်လွန်စေခဲ့ ပါဘူး။ သို့သော်ငြားလည်း ကျွန်တော်ဟာ သူမကို ဘယ်လောက်ချစ်ကြောင်း၊ သူမအတွက်ဘယ်လောက် အမှန်တကယ် ဂရုစိုက် ကြောင်းကို သူမ သိလိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော်မထင်ပါဘူး။ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း ကျွန်တော်ဟာ သူမအပေါ် ထားရှိတဲ့ မေတ္တာ အကြောင်းကို မပြောပဲ မနေနိုင်ပါဘူး။ အဖိုးထိုက်တန်လှတဲ့ ဤဇနီးနဲ့ဘဝကို ဝေမျှခွင့်ပေးတဲ့အတွက် ဘုရားသခင်ကို လည်း ကျေးဇူးမတင်ပဲ မနေနိုင်ပါဘူး။ အမှတ်ရစရာအဖြစ်အပျက် တွေအတွက်လည်း ဘုရားသခင်ကို ကျေးဇူးတင်ခဲ့ ပါတယ်။ ဤသို့သော မေတ္တာသည် အဖိုးထိုက်လှသည်။
ယနေ့လူငယ်များသည်လည်း ဤသို့သော အိမ်ထောင်ရေးမျိုးကို မလိုချင်သလော။ အကယ်၍ သင်သည် ဘုရားသခင်အလိုတော်ကို ရှာ၍လိုက်နာပါက ဤသို့သောအိမ်ထောင်ရေးမျိုးသည် သင့်အတွက် လည်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။
၁။ မိန်းကလေးဘက်မှ ““ငါသူ့ကို လုံး၀ အဆုံးရှုံးမခံနိုင်ဘူး”” ဟုတွေးခြင်းသည် ပြဿနာများကို ဖြစ်စေ နိုင်သည်။
၂။ မိမိ၏ရည်းစားကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ရန်အတွက် မိမိ၏ကိုယ်ကျင့်တရားစံနှုန်းများကို စွန့်လွှတ်ခြင်းသည် မိန်းကလေး
တဦးအတွက် ဝမ်းနည်းဖွယ်ကောင်းလှသော အမှားတစ်ခုဖြစ်သည်။
၃။ သင်သည် သူ့အတွက်မည်မျှပင် ကြိုးစားကြိုးစား၊ မည်မျှပင် သူ့အားချစ်စေကာမူ၊ ထိုသူအား သင့်ကို ချစ်လာရန်
၄။ သင်သည် အချစ်မရှိပဲအသက်မရှင်နိုင်ပါ။ ထိုအချစ်ကိုပေးရန်အတွက် လူများထံမှမမျှော်လင့်နိုင်ပါ။
၅။ သင်၌ ခန္ဓာပိုင်းအရ လိင်ဆက်ဆံရန်အသင့်ဖြစ်နေသော်လည်း၊ ထိုသို့ဖြစ်နေခြင်းက သင်သည် အမှန် တကယ်လိင်
၆။ မျက်မမြင်အချစ်မျိုးဖြင့်ချစ်နေသူကို ““အရူးအမူးတပ်မက်စွဲလမ်းသူ”” ဟုခေါ်သည်။
၇။ သင်သည် တစုံတဦးအား အရူးအမူးတပ်မက်စွဲလမ်းနေပါက၊ သင့်၏အချစ်စိတ်ခံစားချက်များသည် ထိန်းချုပ်ထားခြင်း
ကို ခံရပြီး သင်သည် သာမန်အသိတရားကို အသုံးမပြုတော့ပါ။
၈။ ရမ်္မက်သည် တကိုယ်ကောင်းဆန်ပြီး သူ့အားအလျင်အမြန်ကျေနပ်စေခြင်းကို လိုလားသည်။
၉။ တစုံတဦးနှင့် လိင်ပိုင်းအရ စွဲမက်မှုရှိခြင်းက၊ ထိုသူနှင့်အမှန်တကယ်ချစ်ကျွမ်းဝင်နေသည်ဟု ဆိုလိုခြင်း မဟုတ်ပါ။
၁၀။ စစ်မှန်သောအချစ်သည် မကျဆင်းသွားပါ။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှသာ၍ ကြီးထွားလာသည်။
လူ၏စိတ်ဝိညာဉ်သည် ကိုယ်အတွင်း၌ ရှိရှိ သမျှတို့ကို စစ်ဆေးသော ထာဝရဘုရား၏ မီးခွက်ဖြစ်၏။
Proverbs 20 : 27 JUDSON
Total Visitors: 137,960